That's so good, right?: May 2010
Land Of Cherry ( Part I)
'သော်ဇင်ဟိန်း' ဆိုလျှင် ဆေးတက္ကသိုလ်လောကမှာ မသိသူမရှိလောက်အောင်ပင် ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေပါပြီ။ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ 'သော်သော်'လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ ကျောင်းမှန်မှန်တက် စာမေးပွဲမှန်မှန်အောင်ကာ အခုဆိုလျှင် ဆေးတက္ကသိုလ်မှာနောက်ဆုံးနှစ်ပြီးသွား၍ အလုပ်သင်ဆရာဝန်အဖြစ် ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာ ဟောက်စ်ဆာဂျင်လုပ်နေပါတယ်။
တက္ကသိုလ်မှာတုန်းက အသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ စာလည်းတော်နေလေတော့ ဆရာများနှင့် အခြားကျောင်းသားများရဲ့ ဂရုစိုက်ခြင်း ခံခဲ့ရတယ်ဗျ။ နောက်.... တနည်းအားဖြင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကြောင့်လည်း လူအများဂရုစိုက်ကြလေသလားမသိ။ မိဘများ ကလည်း ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများဖြစ်သည့် အလျောက် သားအငယ်ဆုံး ကျွန်တော့်မှာ တစ်စုံတရာ ချို့တဲ့ခြင်းမရှိစေရဘဲ အလိုဆန္ဒများ ပြည့်ဝအောင် ထားခဲ့ကြပါတယ်။
ငယ်စဉ်ကပင် ILBC လို ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေမှာနေခဲ့တာဆိုတော့ အပြောအဆို အနေအထိုင်မှ စပြီး အနောက်တိုင်းဆန်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရုပ်ရည်ကိုကြည့်ဦးမလား? အသားဖြူဖြူဝင်းဝင်း၊ ဆံပင်က လှိုင်းကလေးတွေနဲ့ ပြုံးလိုက်ရင် ပါးချိုင့်လေးတွေပါသလို ရယ် လိုက်ရင်တော့ သွားတက်ကလေးတွေပါတာ မေးနှစ်ခွနှင့်ချစ်စရာကောင်းသူလို့ ပြောကြပါရဲ့။ ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် ကျွန်တော့်ကိုယ် ပေါ်မှာ ရာသီအလိုက် ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေ မထပ်စေရ။ ညနေပိုင်း အားလပ်ချိန်မှာ ကိုသွားသွားနေတော့ ရုပ်ချောကိုယ်လှ ဥစ္စာပေါ ဖြစ်ကာ ပျိုပျိုမေတို့သာမက ရွယ်တူကောင်ကလေးတွေကလည်း အသည်းစွဲချင်သလားမသိ သူတို့အချင်းချင်း တီးတိုးတီးတိုး သဖန်းပိုး လုပ် တတ်ကြတာ ပုံမှန်ကိုဖြစ်လို့ပါ။
ကျွန်တော်က ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်ပေမဲ့ ပညာရေးကိုတော့ အလစ်အဟင်းမခံခဲ့ပါ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက စိတ်ဝင်စားခဲ့ရသော နှလုံးအထူးကု ဆေးပညာဘွဲ့အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်သွားရန် လျှောက်ထားခဲ့ပါသည်။ ဒီနေ့ညနေမှာတော့ ဆေးရုံက အပြန် ဌာနထဲ ခဏနားနေစဉ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကထိက ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်အုန်းကြည်က တွေ့လိုကြောင်း လာရောက် ခေါ်သဖြင့် လိုက်သွားရာ ဆရာမကြီးက 'ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း' ဟုနှုတ်ဆက်ပြီး သူမလက်ထဲမှ စာအိတ်တစ်ခုကို ကျွန်တော့်အား ကမ်းပေး လိုက်ပါတယ်။
သိလိုဇောဖြင့် စာအိတ်ကို ကြည့်လိုက်ရာ အစိုးရကိစ္စဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ စာထဲတွင် ပါသည့်အကြောင်းအရာမှာ နှလုံးအထူးကု ဘွဲ့အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရွေးချယ်စေလွှတ်ကြောင်းနှင့် လိုအပ်သောအစီအစဉ်များပြုလုပ်ပြီး ရှေ့လာမည့်လများအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာ သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့်ဖော်ပြပါရှိပါသည်။
မျှော်လင့်ထားမှုများ ပြည့်စုံလာမှုကြောင့် ၀မ်းသာရသည်မှာ ညနေထမင်းကိုပင်ဖြောင့်အောင်မစားနိုင်တော့။ နောက်ရက်များတွင် ခွင့်ယူ၍ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း၊ နိုင်ငံကူးလတ်မှတ်ကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မြန်မာပြည်ရှိ ဂျပန်သံရုံးသို့သွားကာ အလိုရှိသော ကိစ္စ များစုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းများပြုလုပ်ရင်း အချိန်တွေကုန်လွန်စေခဲ့ပါသည်။
ခရီးဆောင်အိတ်ထဲ အ၀တ်အစားအပါအ၀င်အားလုံးပြင်ဆင်ထည့်ပြီးချိန်မှာတော့ ရင်ထဲ တဖိုဖိုနှင့် သွားရမည့်ရက်တွေကို စောင့်မျှော်မိ ပါတော့သည်။ ကျွန်တော် ဂျပန်ပြည်ကို မထွက်လာမီတစ်ရက်မှာတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆရာ ဆရာမများနှင့် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများက ဂုဏ်ပြုပွဲငယ်ကလေးတစ်ခုပြုလုပ်ပြီး နှုတ်ဆက်ကြပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ ၀မ်းသာခြင်းနှင့် ၀မ်းနည်းခြင်းတို့ ရောယှက်နေတော့တာ။
နောက်နေ့ညနေပိုင်းတွင် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှ MAI TG လေယာဉ်ဖြင့်ထွက် Thai တွင် Transit လုပ်ကာ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ခရီးစတင် ထွက်ခဲ့ရပါတော့သည်။ စီးနင်းလိုက်ပါခဲ့သော ဂျက်လေယာဉ်မှ တစ်နိုင်ငံပြီးတစ်နိုင်ငံ ဖြတ်ကျော် ပျံသန်းရင်း နာရီပေါင်းများစွာကြာ ပြီးသောအခါ ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့တော် လေယာဉ် ကွင်းသို့ဆိုက်ရောက်ဆင်းသက်ခဲ့ပါတော့သည်။ အောက်တိုဘာလ ဖြစ်တာနှင့်အညီ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရာသီဥတုမှာ အလွန်ချမ်းအေးလျှက် ရှိပါသည်။ တည်းခိုရန် ဟိုတယ်သို့ ရောက်ရှိ၊ ပစ္စည်းများ နေရာတကျ ထားပြီး နောက်မှာတော့ စိတ်အေးချမ်းသာစွာ အိပ်စက်လိုက်ပါတော့ သည်။
တိုကျိုမြို့တော်သို့ရောက်ပြီး နောက်တနေ့တွင်ပြုလုပ်စရာရှိသော အစိုးရကိစ္စအ၀၀ကိုပြုလုပ်ပြီးနောက် ကျွန်တော်ပညာသင်ကြားရမည့် ဆေးတက္ကသိုလ်သို့ သွားရောက်ပြီး ပညာတော်သင်အဖြစ်ရောက်ရှိလာကြောင်း သတင်းပို့ပြီးပြန်ခဲ့ပါတော့သည်။ ရောက်စ ၂ရက် ၃ရက် အတွင်းမှာတော့ တစ်ကိုယ်တည်း ခြောက်သွေ့စွာ နေထိုင်ခဲ့ရပြီး အိမ်လွမ်းနာကို စတင်ခံစားရစပြုသလိုဖြစ်ရသေးတယ်။
ကျောင်းစတက်ရတော့လည်း နိုင်ငံခြားသားကျောင်းသား လူသစ်ဖြစ်နေသောကြောင့် သူငယ်ချင်းအဖော်မရှိသော်လည်း ၂လအတွင်း၌ ပင် သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကောင်းများရရှိခဲ့ပါသည်။
ကျောင်းသားကျောင်းသူများစွာမှာ ဂျပန်လူမျိုးသက်သက်သာမဟုတ် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ ဆေးပညာသင်ရန် ရောက်ရှိနေကြသော အိန္ဒိယ၊ ကိုရီးယား၊အာဖရိက စသည့်နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုတွေ့ရှိသိကျွမ်းခဲ့ရလေ၏။ ထိုအထဲတွင်မှ အရင်းနှီးဆုံး နှင့် အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိပေသည်။ သူကား ဂျပန်လူမျိုး ကောင်ကလေး 'Hitoshi' ဆိုသူဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်နှင့် အဆောင် တစ်ခုထဲ အခန်းတစ်ခုထဲနေရသော ဆေးကျောင်းသားဖြစ်ပေသည်။ သူက ကျွန်တော့်ကို အထူးဂရုစိုက်ကြင်နာသလို တစ်ခါတလေ သူ့ဂရုစိုက်မှုများဟာ ကျွန်တော့်ကို ရင်ခုန်စေသလိုပါပဲ်။ ကျွန်တော့်ရင်တွေဘာကြောင့် ရင်ခုန်ပါလိမ့်နော်။
ရက်၊လ၊နှစ်များ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း နှင့် မြို့တွင်းမြို့ပြင်လည်ပတ်သွားလာလျှက် ဂျပန်နိုင်ငံ၏မြို့တော်ကို လေ့လာမိပါသည်။ လူတွေ ပျားပန်းခတ်သွားလာလှုပ်ရှားလျက်ရှိသောကြောင့် နေ့ညမပြတ် စည်ကားလျက်ရှိ၏။ ညအချိန်တွင် နီယွန် မီးရောင်စုံထွန်းညှိထားသောကြောင့် မြို့၏ကျက်သရေကို တင့်တယ်စေပါသည်။ ကုန်တိုက်များ၊ ဟော်တယ်များ၊ စာအုပ်ဆိုင်ကြီးများနှင့် လူစည်ကားရာဈေးများမှာ နိုင်ငံခြားသားများခြေချင်းရှုပ်အောင် သွားလာလည်ပတ်သော အချက်အခြာများဖြစ်တော့သည်။
တနေ့သော ဧပြီလ ညတစ်ညတွင် ကျွန်တော်၏သူငယ်ချင်း 'Hitoshi' ကအပြင်သို့ အလည်သွားရန်ခေါ်သဖြင့် ကျွန်တော်လည်း အလန်းစားပြင်ဆင်ကာ သူနှင့်လိုက်ပါခဲ့တော့သည်။တိုကျိုမြို့တော်၏ ညရှုခင်းများကို နေရာအနှံ့အပြား လည်ပတ်ကြပြီးနောက် လူစည်ကားရာ မြို့လယ်ပန်းခြံကြီးတစ်ခုအတွင်း ခုံတန်းလျားတစ်ခုတွင် ကျွန်တော်တို့အနားယူအပန်းဖြေရသည်ပေါ့။ ကျွန်တော်သိလို သော ဂျပန်နိုင်ငံအကြောင်းတွေကို မေးကြည့်ရာ 'Hitoshi'က ဂျပန်နိုင်ငံ လှုမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံများအကြောင်း စိတ်ရှည်လက် ရှည် ရှင်းပြ၊ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ လူနေမှုစနစ်များကိုလည်း ပြောပြပါသည်။ သူသိလိုသော မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း များကိုလည်း ကျွန်တော်က တစ်ဆင့်ဖောက်သည်ချလျှက် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ပိုမိုခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ကြရလေတော့သည်။
ပန်းခြံ၌ ည၇နာရီခွဲအထိ အချိန်ဖြုန်းလိုက်ပြီးသည့်နောက် ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းဆောင်သို့ပြန်ရန် နေရာမှထလိုက်ကြသည်။ ထို့အခိုက် ကျွန်တော်တို့နားတွင် မည်သည့်အချိန်က ရောက်နေသည်မသိရသော လူတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း 'Hitoshi' အားရင်းရင်း နှီးနှီး နှုတ်ဆက်ရင်း စကားအနည်းငယ်ပြောဆိုကြကာ ကျွန်တော့်ဘက်သို့လှည့်ကာ.... 'Hitoshi' က သူနှင့်ချစ်ကြိုက်လျက်ရှိသော သူ၏ ချစ်သူ 'Koji' ဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးသောအခါ ကျွန်တော်နှင့် 'Koji' တို့နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်လက်တစ်ယောက်ဆွဲကာ ရင်ချင်းအပ် ပခုံးခြင်းဖက်ကာ နှုတ်ဆက်ရသည်ပေါ့။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ တစ်ခုခုနင်သွားသလိုပင်။ 'Hitoshi' ကို သ၀န်တိုသည်လား အမျိုး သား နှစ်ယောက် က ချစ်သူဟုဆိုခြင်းကြောင့်လားတော့မသိ။ ရင်ဘတ်ထဲတော့ ထူးဆန်းသော ရင်ခုန်မှုတစ်မျိုးလည်း ဖြစ်တည်လာ တော့သည်ပဲ။
'Koji' က 'Hitoshi' ဘက်လှည့်ကာ 'ရှင်ဂျုကု'သို့သွားကြဖို့ပြောဆိုသလို အဲဒီမှာရှိတဲ့ သူတို့သွားနေကြ Shinjuku's 2chome မှကလပ်တစ်ခုကို လိုက်ခဲ့ဖို့ ကျွန်တော့်ကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်လေရဲ့။ ဒီတော့ အသစ်အဆန်းလုပ်ရတော့မယ့်သူလို ကျွန်တော့်ရင်တွေ တဖိုဖိုဖြင့် လက်ခံဖြစ်လိုက်ပါသည်။
အချိန်သိပ်မကြာ သွားလိုက်ရတဲ့ကာလတစ်ခုအပြီး ညကလပ်တစ်ခုဆီသို့ရောက်ရှိသွားကြတာမှာ သူတို့ကတော့ အထာကျနေပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ အဆန်းဖြစ်နေတာလေ။ မငြင်းဆန်မိတဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်လည်းအံ့သြမိပါရဲ့။ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်မှ တစ်မျိုး တစ်မည်ဖြစ်ချင် စမ်းသပ်ချင်လာတာကြောင့် 'Hitoshi' အလိုကျအပေါင်းအသင်းဖြစ်ခဲ့ရတာ။
ကလပ်ထဲမှာတော့ ပြာလဲ့လဲ့မီးရောင်ကိုသာထွန်းထားတာကြောင့် ကျွန်တော့်ဘေးကထိုင်နေသော 'Hitoshi'တို့စုံတွဲမှအပ အခြားသူ များကို သဲကွဲစွာမမြင်နိုင်ချေ။ 'Hitoshi' ၏ချစ်သူ 'Koji' ကဘီယာဖန်ခွက်ကိုမော့လိုက် 'Hitoshi' နှင့် တီးတိုးပြောဆိုရယ်မောလိုက်နှင့် ကျွန်တော့်ကိုမေ့နေသလားမသိ။ ဟိုသည်ကြည့်နေရင်း သတိပြုမိရသည်က ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေသောနေရာမှာ စတိတ်စင်တစ်ခုနား ကပ်လျှက်ရှိသောကြောင့် ဂီတသံများကို ကောင်းစွာကြားနေရပါသည်။
၁၀မိနစ်လောက်အကြာမှာတော့ တေးသံများတိုး၍ပျောက်ကွယ်သွားပြီး စင်ပေါ်မှ ကတ္တီပါလိုက်ကာကြီးပွင့်သွားကာ ခပ်ချောချော လူငယ်တစ်ဦးအမှောင်ထဲမှ တီးလုံးနှင့်အညီ ခပ်ဖြေးဖြေးထွက်လာပါတော့သည်။ ဆလိုက်မီးကလည်း မှောင်ရာမှ တဖြည်းဖြည်း လင်း လဲ့လဲ့ဖြစ်လာကာ အဆိုပါ လူငယ်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် အလင်းမရောက်တရောက်ပေးထားပုံမှာ ဂရိနတ်သားတစ်ပါးကောင်းကင်ဘုံကကျ လာသလိုထင်မှတ်မှား စေပါတော့သည်။ ခါးမှာ အ၀တ်စာလေးတစ်ခုကို တည်းတည်းလေးချည်နှောင်ထားပြီး အချိုးကျခန္ဓာကိုယ်ကို လှုပ် ရှားဟန်တစ်မျိုးဖြင့် ယိမ်းနွဲ့ကာ အရှေ့သို့ထွက်လာပုံမှာ ရင်ခုန်ဖို့ပိုကောင်းသည်ပဲ။
စင်ရှေ့နားက ဆိုဖာပေါ်မှာ ယိမ်းနွဲ့လှုပ်ရှားနေရင်း နှိုးဆွကပြနေစဉ်မှာ တီးလုံးသံခပ်ပြင်းပြင်းထွက်ပေါ်လာလျှက် အတော်ထွားကြိုင်း တောင့်တင်းသော ကာယဗလမောင်ဆိုက်နဲ့လူငယ်တစ်ဦးထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြန်သည်။ ဒုတိယလူက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပထမလူနား ကပ်သွားပြီး အနားသို့ရောက်သောအခါ ခွဲခွာနေကြရသော ချစ်သူများပမာ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ပြေး၍ဖက်ထားလိုက်ကြ လေသည်။ တစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျှက် ဘာသံမျှမကြားရတော့။ တီးလုံးသံများမှအစ ဘာသံမှမကြားရပေ။ ဂျပန်ဘဲချောချော လေးနှစ်ယောက်မှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကြင်နာယုယစွာ ပွေ့ဖက်နမ်းရှုံ့ကြပြီးသည့်နောက် ခပ်တောင့်တောင့် လူငယ်က အခြားလူငယ် လက်ကိုဆွဲကာ အခန်းတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားလေသည်။ အခန်းတွင်း၌ အဆင်သင့်ပြင်ထားသော ကုတင်ကြီးတစ်လုံးရှိပြီး အခမ်း အနားကို လှပစွာပြုလုပ်ထားလေသည်။ ခပ်တောင်တောင့် ကိုကိုထွားက အခန်းတွင်းသို့ရောက်ပြီးနောက် သူ့အဖော်ကောင်လေး ကိုကိုချောကို တစ်ချက်မျှနမ်းလိုက်ပြီး အ၀တ်များကို ဆွဲချွတ်တော့သည်။ ခပ်ချောချောကောင်လေး ကိုကိုချောမှာ သဘောမတူဟုန်ပြု သော်လည်း သူဝတ်ထားသော အ၀တ်မှာ အထူးအထွေမဟုတ် အ၀တ်စတစ်ခုသာပတ်ထားသည်ဖြစ်သောကြောင့် တစ်ထည်သာကျန် တော့သောပေါ့။ ကိုကိုချောက ဟန်မူပါပါဖြင့် ဘေးတစ်စောင်းလှည့်လိုက်ချိန်တွင် ကိုကိုထွားက တင်ပါးတွေကို အသာအယာဖျစ်ညှစ် လိုက်ပြီးနောက် သူ့ကိုယ်ခန္ဓာမှ အ၀တ်တွေကိုလည်း စတင်ချွတ်နေပါတော့သည်။ အပေါ်ရှပ်ကို ချွတ်လိုက်တော့ ရင်အုပ်ကားကားတွေ က အားရစဖွယ်ထင်းကနဲပေါ်လာသလို ဘောင်းဘီကိုချွတ်ချလိုက်သောအခါမှာတော့ ပေါင်ကြားက ဒုံးပျံက မိုးပေါ်ထောင်နေတာ ထွား မှထွား။
ပြောရရင်တော့ ခုတင်ပေါ်မှာ မှောက်လျက် တင်ပါးခပ်ကော့ကော့အနေအထားဖြင့် လှုပ်ရှားနေသည့် ကိုကိုချော၏ လည်ဂုတ်အား အသာနမ်းလျက် သူ၏လုပ်ငန်းစရန် သိုင်းဖက်လိုက်ကာ အိပ်ယာပေါ်တွင် ထိုင်လိုက်တော့သည်။ ကိုကိုချောက အောင်မြင်ကြီး ထွားလှသော ကိုကိုထွား၏ -ီးကြီးကို တက်မက်သောမျက်လုံးများဖြင့် ကြည့်နေသလို ကိုကိုထွားကလည်း သူ၏လက်တွင်း ရောက်နေသော ကိုကိုချောကို စူးစိုက်ကြည့်နေတာများ တက်မက်မိန်းမူးစွာ။
ပထမတော့ ကျွန်တော်မျက်နှာမထားတတ်အောင်ရှက်နေမိပါသည်။ ထို့နောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကို တစေ့တစောင့် အကဲခတ်လိုက် သောအခါတွင် စုံတွဲတိုင်းလိုလိုသည် စင်ပေါ်မှ ဘဲနှစ်ပွေနှင့်အပြိုင် နှုတ်ခမ်းခြင်းတေ့လျှက် နမ်းစုပ်နေကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် ယခုကဲ့သို့ လူကိုယ်တိုင်အရှင်လတ်လတ်ကပြသော ဖျော်ဖြေမှုမျိုးကို မကြည့်ခဲ့ရဘူးသောကြောင့် ကျွန်တော့် ရင်ထဲ တဒိန်းဒိန်းနှင့်ခုန်နေပါသည်။ ရှက်နေသလိုဖြစ်နေသော်လည်း မကြည့်ဘဲမနေနိုင်သောကြောင့် စင်ပေါ်ကအတွဲကို ဆက်လက် ကြည့်လိုက်သောအခါတွင်မှာတော့ ကိုကိုထွားက သူ့လဒစ်ထွားထွားကိုအရင်းက ကိုင်လျက်ခါးအားဇကောဝိုင်းကလျက် ကိုကိုချော ရဲ့မျက်နှာရှေ့မှာ ဝေ့၀ဲပြလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ခုတင်ပေါ်က ကိုယ်တော်ချောရဲ့မျက်လုံးတွေဟာ တက်မက်မှုကြောင့် အရောင် တွေတောက်လာသလို သူ့နှုတ်ခမ်းမှလျှာများဟာလည်း မြွေတစ်ကောင်လို ပြူတစ်ပြူတစ်ဖြင့်။ ခဏကြာတော့ လက်ဖြင့်လှမ်းကိုင် လိုက်ကာ သူ့နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာထဲ စုပ်ယူလျှက် ပြုစုပါတော့သည်။ ကိုကိုထွားကလည်း ခါးကိုကော့ကာ အရသာခံလျက်ဖြင့် လက်တစ်ဖက် ကလည်း ကြားကပေါ်နေတဲ့ ခရေ၀ကို လှမ်းလှမ်းကလိနေသေး၏။ အတန်ကြာ လဒစ်ကိုစုပ်မျိုပြီးနောက် ကိုကိုထွားက လက်ဟန်အမူ အယာဖြင့် ပြလိုက်ရာ ကြိုးကိုအသာလျှော့ကာ မွှေ့ယာပေါ်အသာခပ်ကုန်းကုန်း ကိုကိုချောက မှောက်လိုက်လေသည်။
တင်ပါးတွေကို လက်ဝါးဖြင့် ခပ်ဆပ်ဆပ်ရိုက်လျက် ဆုပ်ညှစ်လျက်ကိုင်တွယ်ပြီးနောက် လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်စုံကိုင်ဖြဲကာ မျက်နှာအပ်လိုက လေတော့သည်။ လျှာတစ်ချောင်းလုံး အလျားလိုက် ဒေါင်လိုက် ရစ်ဝိုက်လိုက် ကိုကိုထွားကပြုစုနေသည်မှာ ကိုကိုချောတစ်ယောက် ဆံနွယ်တွေ ဝေ့၀ဲနေအောင် ဖီးလ်တက်နေလေပြီ။ နောက် ကိုယ်ခန္ဓာကို လက်ဖြင့်အလိုက်သင့်ဆွဲယူလိုက်ပြီးနောက် လေးဘက် ထောက် အနေအထားဖြစ်စေကာ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုနွှဲဖို့ ဆက်လက်ပြင်ဆင်တော့သည်။ ခုတင်ဘေးက စင်လေးပေါ်တင်ထားသော ဘူးကြီးကိုယူ ခရေ၀ မှာ များများညှစ်ချ သူ့လဒစ်မှာ ကွန်ဒွန်ကိုစွပ်ကာဖြင့် ကီသွင်းနေသည့် ကိုကိုထွားကို ကြည့်ရသည်မှာ ကျွန်တော်ဖြင့် လန့်မိသလို ရှိသား။
ခပ်ကုန်းကုန်းဖြစ်နေသူရဲ့ တင်ပါးကို အသာဖြဲ ဒစ်ကြီးအားကွမ်းသီးခေါင်းမှ တဆင့် အရင်းသို့တိုင် ခပ်ပြင်းပြင်းလေးဆောင့်သွင်းလိုက်ရာ ကိုကိုချောခမျာ ခါးကော့သွားက အော်သံသဲ့သဲ့ထွက်သည်အထိ ညည်းတွားလေတော့သည်။ ထိုသို့ကြည့်နေရင်းက ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ဖိုလှိုက်ဖိုလှိုက်ဖြစ်ကာ မဖော်ပြတတ်သော ဝေဒနာတစ်ခုကို ခံစားနေရလေသည်။ အောက်ကလူက ထွန့်ထွန့်လူးနေသလိုပင် အပေါ်က လူကလည်းအားနဲ့မာန်နဲ့ ဆောင့်နေသည်မှာ တဖွတ်ဖွတ်တဖတ်ဖတ် အသံများထွက်လာသည်အထိ တအားဆောင့်နေ၏။ အရှိန်ပါလာ သည့်အခါများတွင် ရွှေဥများပါမြှုပ်ဝင်သွားမတတ် ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ပေးလျှက်ရှိသလို အောက်ကလူကလည်း အားကျမခံ အောက်မှနေ ၍ ကော့ကော့ပေးလေသည်။ ၅မိနစ် ၁၀မိနစ်ခန့်ကြာသောအခါ ကိုကိုထွားမှာ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်ကာ ကိုကိုချောပေါ်သို့မှောက်ကျ သွားလေသည်။
ကိုကိုထွားက သုတ်ရည်ထွက်သွား၍ တစ်ချီပြီးသွားသော်လည်းကိုကိုချောမှာ ကျေနပ်ပုံမရသေးပေ။ သူ၏တင်ပါးနှစ်လုံးကို ဆတ်၍ ဆတ်၍ကော့ပေးလျှက်နေပြန်သည်။ ခဏကြာသော် သူစိတ်မရှည်သလို အိပ်ရာပေါ်တွင် ထထိုင်ကာ ကိုကိုထွားကိုဆွဲထူလိုက်၏။ ပြီးလျှင် ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ကာ တွဲကျနေသော -ီးကြီးကို လက်ဖ၀ါးဖြင့် ရှေ့တိုးနောက်ငှင်ပြုလုပ်ပေးနေသည်။ ထိုမှတဖန် ပါးစပ်တွင်း သို့ထည့်ကာ အသံမြည်အောင်ပင် စုပ်ပေးနေသဖြင့် ကိုကိုထွားမှာ တစ်ကိုယ်လုံးတွန့်တွန့်လူးနေတော့၏။ အာငွေ့ကြောင့် -ီးကြီးမှာ သံမဏိချောင်းပမာထောင်လာရာ ကိုကိုချောက ကွမ်းသီးခေါင်းကို သူ့ပါးစပ်ကချွတ် တစ်ချက်အနမ်းပေးရင်း နှစ်သိမ့်လိုက်လေသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကိုကိုထွား၏ ညီ ငထွားအစွမ်းကုန်မာထောင်လာသောအခါတွင် ကိုကိုချောက အိပ်ယာပေါ်သို့လှဲအိပ်ကာ ပေါင်နှစ်လုံးကို အပေါ်မြှောက်လျက် တစ်တီတူးထောင်ပေးလိုက်ရာ သူ၏ခရေ၀မှာ ပွင့်အာသွားလေသည်။ ဒါကို ကိုကိုထွားက ခြေထောက်တွေကို ထိန်းကိုင်လျှက် သူ၏-ီးကြီးကိုတစ်ဆုံးထိုးထည့်ကာ စက်သေနတ်ပစ်တော့သည်။ သူတို့စုံတွဲမှာ အပေးအယူမျှမျှတတနှင့် -ိုးကြပြီး မကြာမှီပင် နှစ်ယောက်သား ကုတင်ထက်တွင် ငြိမ်ကျသွားလေတော့သည်။
ကိုကိုထွားမှာ မောပန်းစွာအိပ်မောကျသွားပြီဖြစ်သော်လည်း ကိုကိုချောက အိပ်မပျော်သေးဟန်ဖြင့် ထထိုင်ကာ စာဖတ်ခန်းသို့ သွားလေ သည်။ ထိုအခိုက်တွင် မှောင်ရိပ်မှာ ချောင်းနေသူ ဂျပန်ကြီးတစ်ယောက် အခန်းထဲဝင်လာပြီး တံခါးအား ချက်ချလိုက်တော့သည်။ ကိုကိုချောက စာဖတ်ခန်းထဲက ဆိုဖာပေါ် ခဏလှဲနေပြီး မျက်စိမှိတ်ကာ အနားယူဟန်ပြချိန်တွင် ဂျပန်ကြီးက ရုတ်တရက် ပွေ့ဖက်လိုက် ကာ ကြမ်းပြင်ပေါ်လေးဖက်ထောက်စေဖို့ ကြိုးစားရင်း ပါးစပ်ကလည်း ဘာတွေပြောနေမှန်းမသိ။ ကိုကိုချော ခမျာ သူ့ချစ်သူမဟုတ် သည့် တခြားတစ်ယောက်ရဲ့ အတင်းအကျပ်ပြုကျင့်မှုကို ခံရတော့မည်မှန်းသိ၍ ငြင်းဆန်ပေမဲ့ ဂျပန်ကြီးက အထာနပ်စွာဖြင့် တစ်ခုခု ပြောကာ ခြိမ်းခြောက်လိုက်ဟန်တူပါသည် ထိုလူကြီးရဲ့ လက်တွင်း ရွှံ့ရုပ်ဖြစ်သွားပါရော။
နှစ်ယောက်လုံးအ၀တ်ကင်းမဲ့ကြကာ ဆိုဖာပေါ် ပြန်တက်လူးလှိမ့်လှိမ့်အတော်ကြာ လှုပ်ရှားကြပြီးနောက် ဂျပန်ကြီးထရပ်လိုက်ရာ ပေါင်ကြားထဲက -ီးကြီးက ဘယ်အချိန်က ထောင်ထနေသည်မသိပါ။ အလွန်ထွားကျိုင်း ရှည်လျားသော -ီးကြီးမျိုးတစ်ခါမှ ကျွန်တော် မမြင်ခဲ့ဖူးပါ။ စင်ပေါ်ကပြရန် တမင်ရွေးချယ်ထားကြလေသလားမသိ။ ယခုဖျော်ဖြေပြသော ယောက်ျားတိုင်းအောင်မြင်သော -ီး ပိုင်ရှင်များချည်းသာဖြစ်ပါသည်။
ဂျပန်ကြီး ဆိုဖာပေါ်သို့လှဲလျောင်းလိုက်ရာ ထိုလူကြီး၏ -ီးကြီးမှာ မိုးသို့မျှော်ကာ ထောင်မတ်နေသည်။ ကိုကိုချောမှာ ထိုလူ့မျက်နှာ ကိုကြည့်လိုက် ရှည်လျားလှသော -ီးကိုကြည့်လိုက် ကြောက်များနေရော့သလားပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုကိုချောက အပေါ်မှတက်ခွကာ သူ့ခရေ၀ သို့ အသာတေ့ရင်း ဖင်ကို အသာကြွ၍ ခပ်ပြင်းပြင်း အံကြိတ်၍ ထိုင်ချလိုက်လေ၏။ 'ဘွတ်....ဖွတ်' ဟူသော အသံများနှင့်အတူ သူ၏ ခရေတွင်းထဲ တနင့်တပိုးဝင်သွားသဖြင့် မျက်နှာတပြင်လုံး ရှုံ့မဲ့သွားလေသည်။ ကိုကိုချော အောင့်သွားရောထင့် အတန်ကြာငြိမ် သက်နေပြီးမှ...သူ၏ တင်ပါးများကို ကြွကာ မြောက်လိုက် ဆောင့်လိုက်ဖြင့် ခပ်ပြင်းပြင်းလေးလုပ်ပေးလိုက်ရာ သူ့အတွက်တော့မသိ ဟိုလူကြီးကတော့ ခါးကိုကော့ပြီး အောက်ကနေ ပင့်ထောက်ထားပေးလေသည်။ ပထမအကြိမ် ကိုကိုချော ခံရပုံနှင့် အခုတစ်ကြိမ် ခံရပုံကမတူ ဒီတစ်ခါက ကြည်ဖြူမှုမရှိ အလိုကျကြမ်းတမ်းစွာ ဆက်ဆံနေရလေသည်။ ကိုကိုချောက ဖြူဖြူသွယ်သွယ် ဂျပန်ကြီးက ကြီးကြီးထွားထွားမဲမဲ ကျွန်တော်ဖြင့် ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီး စိတ်ဝင်စားနေမိရပါသည်။
တီးလုံးသံတစ်မျိုးပြောင်းသွားသလို ဂျပန်ကြီးက ဆိုဖာပေါ်သို့ ကိုကိုချောအား ပက်လက်အနေအထားဖြစ်အောင် ခြေထောက်နှစ်ချောင်း ကို သူ့ပခုံးပေါ်တင်ကာ သူ၏ရှည်လျားထွားကျိုင်းသော -ီးကြီးကို အပေါက်ဝသို့တေ့ကာ အဆက်မပြတ်ဆောင့်နှဲ့တော့သည်။ အောက်မှ ကိုကိုချောမှာ ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်း ပက်ပက်စက်စက် ခံနေရသဖြင့် ထွန့်ထွန့်လူးနေလေသည်။
ကြာလာတော့ နာကျင်မှုကို ဖြေဖျောက်သည်လား လုပ်မိလုပ်ရာလုပ်သည်လားတော့မသိ ကိုကိုချောလေ ထိုဂျပန်လူကြီးဆောင့် လိုက် တိုင်း သူပါပြန်လည်ဆောင့်ပေးနေလေသည်။ ရုတ်တရက် ကိုကိုချောက ဂျပန်ကြီးအား သူ့ကိုယ်ပေါ်မှ တွန်းချလိုက်သောအခါ -ီးကြီးမှာ ဖင်ဝမှကျွတ်ထွက်သွားပြီး တန်းလန်းကြီးဖြစ်နေ၏။ ထို့နောက်ထွက်ပြေးမလိုလုပ်ရာ ဂျပန်ကြီးက လှမ်းဆွဲလိုက်တော့ ကြမ်းပြင်ပေါ်ဝယ် ခပ်ကုန်းကုန်းအနေအထားဖြင့် လဲကျသွားလေသည်။ ဒီတွင် ဂျပန်ကြီးက တင်ပါးတွေကို တဖျန်းဖျန်းမည်အောင် ရိုက်လိုက်ကာ ပါးစပ်က ဘာပြောသည်မသိ ကိုကိုချော အဲဒီ့အတိုင်း ပုံစံမပြောင်းငြိမ်နေဆဲမှာ အချိန်ဆိုင်းမနေတော့ နောက်ကနေ အသာနေရာယူလိုက်ပြီး -ီး ကြီးကို ဖင်ဝသို့သွတ်သွင်းကာ ညှောင့်တော့သည်။ ၁၅မိနစ်ခန့်ပြီးသောအခါ ကိုကိုချောက သူ့တင်ပါးတွေကို နောက်ကို တွန်းတွန်း ပို့နေသလို ဟိုလူကြီးကလည်း အသားကုန်ပို့နေလေသည်။
တီးလုံးသံ ဆူညံစွာပြောင်းလဲသွားပြီး ကိုကိုချောမှောက်ရက်ကျသွားသလို ဂျပန်ကြီးကလည်း သူ့အပေါ်မှောက်လျက် အိပ်ချလိုက် သောအချိန်တွင် ကတ္တီပါလိုက်ကာမှာ တဖြည်းဖြည်း ပိတ်သွားလေတော့သည်။
ကပွဲပြီး၍ ထွက်လာစဉ်မှာတော့ ကျွန်တော့်မှာ ပေါင်ကြားက ညီဘွားက အတင်းခေါင်းထောင်ထနေသဖြင့် ဘောင်းဘီထဲမှာ ထိုးထိုး ထောင်ထောင်ဖြစ်လို့။ 'Hitoshi'ကြည့်လိုက်တော့လည်း သူ့ဘက်ဂီဘောင်းဘီထဲ မသိမသာ ဖောင်းနေရော။ သူ့ချစ်သူ 'Koji' ကတော့ မျက်နှာတစ်ခုလုံး အဆီပြန်နေကာ မျက်လုံးတွေက ရီဝေေ၀ဖြင့် အရောင်လက်နေ၏။ သူတို့နှစ်ယောက်ကို အားနာသဖြင့် ကျွန်တော် ကပင် ရှေ့ကထွက်လာပြီးအပြင်ရောက်မှ တက္ကဆီတစ်စီးကို ခေါ်လိုက်ပါသည်။ ထိုနေ့ညက ကျွန်တော့်ကို ကျောင်းဝင်းထဲက ကျွန်တော် တို့အဆောင်ကိုပြန်ပို့သော်လည်း 'Hitoshi'က ဒီနေ့ည 'Koji'နှင့် အပြင်မှာပဲ အိပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆောင်မှူးမေးပါက ကြည့်ပြော ပေးရန် ကျွန်တော့်ကိုမှာကြားပြီး ထိုကားကလေးနှင့်ပင် သူတို့နှစ်ယောက်ထွက်သွားကြလေသည်။
ကျွန်တော်လည်း 'Hitoshi' တို့နှစ်ယောက်အကြောင်းတွေးရင်း ကျောင်းဝင်းထဲဝင်လာကာ အဆောင်ရှိရာသို့ အရောက် အစောင့် ဘိုးတော်က ကျွန်တော့်အားလှမ်း၍ ပြုံးပြလိုက်ပါသည်။ သူ့အပြုံးက အပြင်မှပြန်လာတာ နောက်ကျလှချည်လားလို့ မေးနေသလိုပါပဲဗျာ။ အခန်းထဲရောက်တော့ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ဘယ်လိုဖြစ်နေမှန်းမသိပါ။ ရေချိုးတော့လည်း ရေပူကိုမဖွင့်မိ ဆပ်ပြာတိုက်တော့လည်း ကိုယ့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို ပြန်ကိုင်ကြည့်ရင်း သွေးတွေဆူပွက်လာမိသည်။ ညအိပ်အ၀တ်အစားများလဲလှယ်ကာ ခုတင်ပေါ်လှဲ လျောင်းနေမိတော့ ကပွဲခမ်းမက စုံတွဲရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုကို တစိမ့်စိမ့်တွေးစမြုံ့ပြန်နေရာက ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ညီဘွားအတင်းကို ခေါင်းထောင်ထလာသောကြောင့် ထုံးစံအတိုင်းပင် လက်ငါးချောင်းကို အဖော်ပြုကာ -ွင်းတိုက်ပြီး အိပ်လိုက်ပါတော့သည်။
Posted by Alex Aung at 7:31 PM No comments:
Bunny's Ko Ko (Ending)
၂၀၀၈ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၁)ရက်နေ့ ကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးလည်း အုံ့မှိုင်းနေတယ်။ မိုးများရွာမလားမသိဘူး။ ဆုံနေကြ Moon Bakery ဆိုင်လေးရဲ့အပေါ်ထပ်မှာစောင့်နေမိပါတယ်။ ဘာလို့လည်းမသိ လမ်းပေါ်မှာ ရုံးစုရုံးစုနဲ့လူတွေ။
မိနစ်အနည်းငယ်ထပ်စောင့်ပြီးချိန်မှာတော့ ...သူ ခပ်နှေးနှေးခြေလှမ်းတွေနှင့် ဆိုင်ထဲလှမ်းဝင်လာတာကိုမြင်ရတယ်။ ပြီးတော့......ကျွန်တော်ထိုင်နေရာကို တစ်လှမ်းခြင်းတက်လာတယ်။
သူ့ကို ဘာမှမပြောဘဲ ငေးကြည့်ဖြစ်သလို သူကလည်း ကျွန်တော့်မျက်နှာကို စိုက်ကြည့်နေတယ်။ ပြီးတော့ ကျောပိုးအိတ် ထဲက စာအိတ်နှစ်အိတ်ကိုထုတ်ပြီး ကျွန်တော့်ရှေ့ချပေးတယ်။
'ကိုကို အဲဒီနှစ်စောင်ထဲက ကြိုက်တာရွေးပါ'
'ဘယ်အစောင်ကိုပဲရွေးရွေးပါ ကိုကိုဖတ်ရမယ့် ဖတ်သင့်တဲ့စာပါ'
ဟင် ကျွန်တော့် ဆံပင်မွှေးတွေထောင်များသွားရော့လား။ ခါတိုင်းခရီးကပြန်လာရင် ရေးပေးနေကြ လွမ်းစာခွေမဟုတ် ဖြတ်စာဖြစ်နေတာ။
ဖတ်ရင်း သူ့မျက်နှာမော့ကြည့်တော့ မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်တွေဝဲလို့။
'ကိုကိုပြောတော့ မုံရွာက ကောင်လေးက ညီဝမ်းကွဲဆို။ ကိုကိုရယ် ရက်စက်လိုက်တာ။ သူဟာ Bunny ရဲ့ သူငယ်ချင်း အရင်းကြီး ဖြစ်နေတာ မထူးဆန်းဘူးဆိုနိုင်ပေမဲ့ ကိုကိုဟာ Bunny တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်သူဖြစ်နေတာက ထုးဆန်းတယ် နော်။ မင်းရည်းစား ရပြီလားတဲ့။ ဒီတော့ ကိုယ့်ရည်းစားဓာတ်ပုံကိုပြသလို သူလည်းပြတယ်လေ။ ဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့ တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေတယ်ဗျ'
'သူဟာ ညီဝမ်းကွဲမဟုတ်ဘူးမလား ကိုကို?'
မျက်ရည်တွေ ဖြိုင်ဖြိုင်ကျကာ သူလှေကားကနေ ပြေးဆင်း၊ ဆိုင်ထဲကနေပြေးထွက်သွားတော့တာ ဝေါကနဲ ပြိုကျလာတဲ့ ဆူးလေဘက်ကလာတဲ့ လူအုပ်ကြားထဲကိုလေ။ ကျွန်တော်မျက်လုံးပြူးသွားရသလို ရင်ထဲစိုးရိမ်စိတ်တွေငယ်ထိပ်တက် စောင့်ကာ သူ့နောက်ပြေးလိုက်သွားမိတယ်။ လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်လိုက်ရင်း ရုပ်ရှင်ရုံထဲပြေးဝင်သွားတာကြောင့် ကျွန်တော်လည်းလိုက်သွားကာ သူ့ဘေးမှာ ထိုင်ချဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုဖက်တွယ်မိရတော့ ကျွန်တော့်ပုခုံးမှာခိုမှီကာ ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုတော့တာပေါ့။
ကောင်းကင်ပြင်ကြီးတစ်ခုလုံး အုံ့မှိုင်းနေပြီ Bunny ရေ..။ မကြာခင်မှာ မိုးတွေရွာတော့မယ်ထင်ပါရဲ့။ ကိုယ့်နှာခေါင်းထဲမှာ မြေသင်းနံ့လေးတွေ ရနေတယ်။
ကိုယ်တို့ အတူလမ်းလျှောက်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ မြေနီလမ်းလေးကို သတိရသေးရဲ့လား။ သစ်ပင်စိမ်းစိုနေတဲ့ မြင်ကွင်းကို Bunny လေးကြိုက်တယ်ဆို။
တဖျောက်ဖျောက်ကျလာတဲ့ မိုးစက်တွေဟာ ကိုယ့်ပုခုံးပေါ်ကို စိုရွှဲနေပြီ။ ကိုယ်တို့ထိုင်နေကြ ခုံတန်းလေးမှာ တစ်ယောက် ထဲရယ်ပါ။
မလိမ်ခဲ့ပါဘူး......မလိမ်ညာခဲ့ပါဘူး Bunny ရယ် ညီဝမ်းကွဲဆိုတာက ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ သူဟာ ချစ်သူအဖြစ် ခံစားသတ်မှတ် ခဲ့တာမှမဟုတ်တာ။ ညီလေးတစ်ယောက်အဖြစ်သာ။
မိုးရေတွေနဲ့အပြိုင် ကိုယ့်မျက်ဝန်းမှာလည်း ပုလဲတွေသီကုံးနေပြီပေါ့။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့လည်း မာမီတို့အမေးကို မဖြေဖြစ်ပါဘူး။ အလိုက်သိတဲ့ ဒယ်ဒီက သားကြိုက်တတ်တဲ့ ကော်ဖီ ပူလေးသောက်လိုက်ပါ အ၀တ်လဲပြီးရင်တဲ့။ သား.....သားရင်ထဲ ပူနေပြီ ဒယ်ဒီ။
'ဒီလို မငိုင်နေပါနဲ့ သားနဲ့ဖူးစာပါရင် ပြန်အိုကေမှာပါကွယ်'
ဘာမှ....ဘာမှ စိတ်မပါဘူး ဒယ်ဒီတို့ရေ။ သားဝမ်းနည်းနေတာကြေကွဲနေတာ ဒိုင်ယာရီတွေ ရေးရင်း သီချင်းဆိုနေတာ ရင်ထဲပွင့်ထွက်တော့မယ့် ငိုရှိုက်သံတွေ ဘယ်သူ့ကိုမှ မကြားစေချင်လို့ပါဗျာ။
Bunny ရယ် မင်းအပြုံးလေးကိုချစ်တယ်။ မင်းအနမ်းကိုသတိရတယ်။ ဂရုတစိုက်ဖေးမမှုကို တမ်းတတယ်။
'လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသောဖုန်းမှာ စက်ပိတ်ထားပါသဖြင့် ခေါ်ဆို၍မရနိုင်ပါရှင်'
'မိဆွေ.....Bunny ဒီနေ့ရုံးတက်လား? မလာတော့ဘူးဟုတ်လား?.....သူ...သူဘာပြောသွားလဲဟင်?'
'မနက်က မန်နေဂျာရုံးခန်းကိုလာတယ်။ Resign လုပ်တာလားမသိဘူးရှင့်'
'ဗျာ.....သူနေတဲ့တိုက်ခန်းမှာလည်းမတွေ့လို့ပါ။ ဟုတ်တယ် မိဆွေ ကျေးဇူးပါ'
ဖုန်းခေါ်လိုက်ရင်ကြားနေကြ အသံချိုချိုကိုလည်း ခေါ်လိုက်တိုင်း လူကြီးမင်းဆီက မလွတ်တော့ဘူး။ အိမ်ဖုန်းလည်းမကိုင်။ သွားနေကြ လာနေကြ နေရာတွေမှာလည်း တနေကုန်ထိုင်ကြည့်တာတောင်မတွေ့ရ။
သိရဲ့လား Bunny ကိုယ်မင်းကိုချိုးခဲ့တာမဟုတ်သလို အပျော်အဖြစ်အချစ်ပေးတမ်းကစားခဲ့တာ မဟုတ်ရပါဘူး။
'ကိုယ့်ကို တွေ့ခွင့်ပေးပါ.....မြင်ခွင့်ပေးပါ Bunny'
'၀ုန်း'ကနဲ မြည်သံနှင့်အတူ လျှပ်စီးတစ်ချက်လက်သွားတယ်။ မိုးစက်တွေ မြေပြင်ကို ခပ်ပြင်းပြင်းပြေးဆင်းလာကြတာ လူတွေ ဟိုသည်ပြေးလွှား ခိုနားရာ အမိုးရှိရာဆီပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့.....ဦးတည်ရာမဲ့ ကားကိုမောင်းလာမိတာ မိုးတွေသည်းနေတဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမဆီ။
'တီ...တီ....အရေးထဲ ကားတွေကလည်း ကိုယ့်လမ်းကိုမမောင်းဘူး'
ဥပေက္ခာဆိုတာ ပြုသူကတော့မသိပေမဲ့ အပြုခံရသူကတော့ အတော်ခံရခက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကများ ဥပေက္ခာပြုသွား ရင် ဘယ်လောက်များ ခံရခက်မည်လည်း ကိုယ်ချင်းစာကြည့်ပါလားဗျာ။
ဒီလောက်တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ လူတစ်ယောက်ကို မင်းမရှာနိုင်ဘူးဆိုတာ ညံ့လို့ပဲဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်အတော် ညံ့တာပါပဲ။ သူ့အလုပ်၊ သူ့သူငယ်ချင်းတွေဆီ။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် မုံရွာက ကောင်လေးကိုတောင် မရှက်နိုင်အားပဲဖုန်း ဆက်မေးမိတဲ့အထိ။
'Online က တွေ့တဲ့ကောင်လေးဆိုပြီး ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောထားလိုက်တာလား အစ်ကိုရယ်..။ အစ်ကို အသစ် ရှာနေပြီဆိုတော့ ငယ်လေးအနားမှာ နေရတာမပျော်တော့လို့ပေါ့နော်။ ငယ်လေးကို မချစ်တော့ရင်လဲ လုံးဝမဆက်သွယ်ပဲ ထားခဲ့ပါလားအစ်ကိုရယ်။ အခုတော့ သိရက်နှင့်များ ရက်စက်တဲ့သဘောနှင့် မေးတာလားဗျာ'
တုန့်ပြန်စကားတွေတောင်နှုတ်က မထွက်မိတော့ပါ။ သူပြောသလို ကျွန်တော့်အပြုအမူတွေက ဖြစ်နေခဲ့တာကိုးလေ။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ နေဆယ်စင်းဖြစ်နေရပါပြီ။
'အော်...မိဆွေလား....တကယ်လား...သူအိမ်ပြန်ရောက်နေတယ်။ သူ့အမေအတွက် အစီအစဉ်လုပ်နေတာ။ ဟာ...ရပါတယ် ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးသိရတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်လှပါပြီ'
'အစီအစဉ်တဲ့....ကိုယ့်ကမ္ဘာထဲက ထွက်သွားမယ့် အစီအစဉ်စလုပ်နေပြီပေါ့?'
'ကိုကိုပဲပြောခဲ့တာလေ.....Bunny စိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင် ကိုကို့ကို မုန်းချင်လည်းမုန်းပါ။ ကိုကို့မျက်နှာကို မမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း မမြင်စေရပါဘူးဆို။ အခုတော့ တွေ့ခွင့်တောင်းနေပြန်ပါပြီ'
အဲဒီကိစ္စကို သိသိချင်း ကိုကို့ကို စိတ်နာတယ်၊ ကိုကို့ကိုမုန်းတယ်၊ နောက်ဆုံး Bunny လုပ်ပေးနိုင်တာက ကိုကို့ကိုနား လည်ပေးလိုက်တာပါ
Bunny ဘက်ကိုလည်း ပြန်ကြည့်တဲ့အနေနဲ့ ထပ်ပြီး အဲဒီလိုစကားတွေ မပြောပါနဲ့။ Bunny ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဘယ်လို နည်းနဲ့မှ ပြန်ပြင်မှာမဟုတ်ဘူး။
အရမ်းကိုလည်းရှက်မိပါတယ်....ဒါပေမယ့် Bunny အမှားကို ပြင်ရမယ်လေ..။ လူဆိုတာ ကျင့်ဝတ် စောင့်ထိန်းရတဲ့ သိက္ခာတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်။ ဘယ်သူမှမသိပါဘူးလို့ ပြောဦးမလို့လား ကိုကို...မပြောပါနဲ့တော့ နောင်ဘ၀ဆိုတာ မရှိဘူးလို့ မယုံကြည်တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ ဒါတွေကို ဘယ်နားလည်ပါ့မလဲ...ကိုကိုသာ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။ နောက်ပြီး ကိုကို ၀ါသနာပါတဲ့ အလုပ်တွေကို ကြိုးစားလုပ်ရင်း Bunny ကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေကို ဖြေဖျောက်ပါ......
'အချိန်က အဖြေပေးမယ်လို့ Bunny ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာ'
'Shawty had them apple bottom jeans (jeans)
Shawty got low, low, low, low, low, low, low, low'
တီးလုံးသံတွေကြားမှာ မြူးကြွလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ လူအုပ်ကြားထဲတိုးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ DJ ရဲ့အထူးပြလက်စွမ်းတွေနဲ့ သွက်လက်နေတဲ့ လူအုပ်ထဲမှာ ကိုယ်ရှာတွေ့ချင်တဲ့လူကို တွေ့ရဖို့ မိနစ်အတော်ကြာတယ်။
'Bunny မင်းရဲ့ကိုကိုဆိုတဲ့လူ အလုပ်ကိုလည်း ဂရုမစိုက် ကလပ်တွေသွားပြီး မူးနေသတဲ့ ငယ်လေးကြားတယ်'
'Bunny ရဲ့ ဘော်ဒါ Pioneer မှာအခုတွေ့ခဲ့တယ် မူးပြဲနေတာပဲ'
'ကိုကိုဘယ်မှာလဲ အခု? အဲဒီမှာပဲနေ.....Bunny လာမယ်'
အိုး.....ကိုကိုရယ် အရက်သမားစစ်စစ်တစ်ယောက် မူးနေသလို ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ကနေတာ Bunny မြင်ရလို့သာ ယုံတယ်။ ကိုယ့်သိက္ခာကို မထိန်းတော့ဘူးလားဗျာ။
Bunny သွားဆွဲခေါ်လာတော့အလိုက်သင့်ပါလာတယ်။ ၀မ်းသာသွားတာလား ပြောသမျှ အသာတကြည်လုပ်တယ်။ ဆိုဖာပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေသွားယူရင်း သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို ကျေးဇူးစကားဆိုကာခေါ်ခဲ့ရပေါ့။
'ကိုကို....အရက်တွေသောက် ၊ ဒီလိုတွေနေပြလို့ ပြန်လာမယ်ထင်တာလား? အရက်တွေသောက်ပြီး ကိုယ့်ဘ၀ပျက်ပါပြီဆိုပြီး Bunny ပြန်လာစေချင်တာလား?'
Bunny ကြောင့် ကိုကိုဘ၀ပျက်တာမဟုတ်ဘူး။ ကိုကို့ကြောင့်သာ အနာဂတ်စိတ်ကူးတွေ အချစ်ဆိုတာတွေ ပျက်စီးသွားခဲ့ရတာ။
ဟုတ်တယ်ကိုကို Bunny အိမ်ကိုမောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး ကိုကို့အိမ်ကိုခေါ်သွားနေတာပါ။ မူးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကို စကားတောင်မပြောဘူး။ ကိုကိုဖြစ်နေလို့သာ....ကိုကိုဖြစ်နေလို့သာပါဗျာ။
'Bunny မင်းရှိနေတာကို ကိုယ်သိတယ်'
'Bunny....မင်းအိမ်ထဲက ထွက်လာမလား မလာဘူးလား ကိုယ့်အဆိုးမဆိုနဲ့နော်'
တကယ့်ကို အမူးသမားတစ်ယောက်လိုပါလားကိုကို ။ မတွေ့ချင်တော့ဘူး မတွေ့လို့မရဘူးလား ကိုကိုရယ်။ ကြာရှည် တင်းထားနိုင်မှာ မဟုတ်လို့ပါ။ ကြောင့် ငယ်လေးကို ကိုကိုသစ်စိမ်းချိုးချိုးခဲ့တာတွေးမိတိုင်း စိတ်မကောင်းဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုကိုရယ် မပိုင်ဆိုင်ချင်တော့ဘူး။
အရမ်းပေါက်ကွဲနေတဲ့ ကိုကို...ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာဆိုတာတောင် ဂရုမစိုက်တော့ဘူး။ အိမ်ရှေ့မှာ လာပြီး ထွက်ခဲ့ဖို့ခေါ်နေ တယ်။ ဘယ်အချိန် ဘာလုပ်တတ်တယ်ဆိုတာ သူသိနေတော့လည်း ဘယ်လိုဆက်ပြီးရှောင်ရပါ့မလဲ။
'Bunny ထွက်လာခဲ့.....ကို့ကို ဒီအချိုးမချိုးနဲ့နော်'
'ကိုကို.....ကိုကိုရယ် ကျေးဇူးပြုပြီး အဲဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့...မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ'
'Bunny....Bunny အိမ်ထဲလိုက်ခဲ့ပါကိုကို လူတွေကြည့်နေကြပြီ.....ဟာမဟုတ်ရပါဘူး လိုက်စေချင်ပါတယ် လာပါ'
မျက်နှာနီရဲနေအောင် ဒေါသတွေထွက်နေတယ်။ အရက်လည်းမမူးပါလား။ Sorry ပါဗျာ။ ကိုကို့မျက်ဝန်းတွေမှာ မျက်ရည် တွေ ၀ိုင်းနေတယ်။ အတူတူ ထိုင်နေကြရင်း စကားမဆိုဖြစ်ကြသလို တခြားဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပဲ အတူတူရှိကြတာ ညနေ စောင်းကနေ ညပိုင်း လမ်းမီးတွေ ထိန်လင်းလာချိန်အထိပေါ့။
ကိုကိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟင်းလေးတွေနဲ့ ညစာကို အတူစားဖြစ်ကြရင်း အရမ်းကိုရင်ခုန်လာမိတယ်။ ကိုကို့မျက်ဝန်း တွေဟာလည်း တိမ်းမူးဖွယ်ရာ၊ နှုတ်ခမ်းစုစုလေးကလည်း စိုစွတ်လျှက်။ ဟင့်အင်....ကိုကို။
မညာဘူးကိုကို။ ချစ်နေဆဲပါပဲ။ ကိုကို့ပုံရိပ်တွေရှိနေဆဲပါဗျာ။ Bunny ရဲ့ရင်ထဲရှိနေဆဲ ကိုကို့ပုံရိပ်တွေကို ကိုကို ကိုယ်တိုင် မဖျက်ဆီးပါနဲ့။ Bunny's ကိုကိုဆိုတာ လိမ္မာယဉ်ကျေးသူတစ်ပါးကို အလိုက်သိတဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကောင်လေးလေ...
မုန်းသွားလို့ ခွင့်မပြုတာမဟုတ်ရပါဘူးကိုကို။ အနမ်းလေးလောက်သာ ကျေနပ်ပါတော့။ Bunny ချစ်မိတဲ့ချစ်သူအတွက် Bunnyမှာအချစ်ပဲရှိတယ်။ ကိုကိုရယ် ကိုကို့ကို Bunnyချစ်ပေမယ့် လမ်းခွဲရလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူဆိုတာ ဟီရိသြတ္တပ တရားနဲ့ပြည့်စုံရတယ်။ အရှက်အကြောက်တရား.....လူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုတာတွေလေ.... Bunny သူများ ဆီကဖြတ်လုတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်မဖြစ်ချင်ဘူး...မဖြစ်ချင်ခဲ့ဘူးဗျာ...
ဒီညလေးဟာ အမှတ်တရဖြစ်နေမှာပါ။ ကိုကို Bunny ကိုဖက်ပြီးငိုခဲ့တော့ ချစ်တယ်ဆိုတာ အမှန်တကယ်ဖြစ်မှန်း သိလိုက်ရတာ။ မငိုခဲ့ပေမယ့် ရင်ထဲမှာ မျက်ရည်တွေချောင်းဖြစ်နေပြီ။ ကိုကို့ရင်ခွင်ထဲ ငြိမ်သက်နေတာကိုပဲ ကျေနပ်ပါတော့...။
မဲမှောင်နေတဲ့ ညဟာ ပိုပြီးနက်လာသလို နှစ်ဦးသား မျက်ဝန်းအကြည့်တွေနဲ့သာငေးစိုက်ကြည့် ကြရင်း အဆုံးသတ်ကြပြီ။
'Good night Ko Ko! I hope you'll have all good things'
ပထမရက် ။ ။ 'လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသော တယ်လီဖုန်းမှာ လိုင်းမအားသေး.....'
ဒုတိယရက် ။ ။ 'လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသော တယ်လီဖုန်းမှာ စက်ပိတ်ထားပါသဖြင့်....'
တတိယရက် ။ ။ 'တူ.....တူ
စတုတ္ထရက် ။ ။ 'တူ....တူ'
'ဟုတ်ကဲ့.....သားက Bunny သူငယ်ချင်းပါ ' 'ခင်ဗျာ......သူနိုင်ငံခြားကိုထွက်သွားပြီ...ဘယ်နိုင်ငံကိုလည်းခင်ဗျာ?...ဘယ်တော့ပြန်လာမလည်း?.....ဆက်သွယ်လို့ရ မယ့်လိပ်စာလေး...'
'သားက ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပြစေချင်ဘူးတဲ့ကွယ်'....တဲ့ Bunny လေးရဲ့မေမေကဆိုတယ်။ ရေးခိုင်းခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးကို ကိုကိုဆိုပြချင်တယ် ပေးချင်ပါတယ်။ မပိုင်ဆိုင်နိုင်တော့ဘူး ချစ်ခွင့်မရတော့ဘူးဆိုတာကို သိနေပေမဲ့ ပက်သက်ခွင့်လေး တော့လိုချင်တာပေါ့ဗျာ။ အခုတော့ အဝေးတစ်နေရာဆီထွက်သွားပြီ....ထွက်သွားခဲ့ပြီ။
Bunny လေးသိရဲ့လား.....Bunnyရဲ့ဘ၀ကို မဖျက်ဆီးခဲ့ပါဘူးကွာ Bunny ကိုညာခဲ့တယ်ဆိုတာ ကိုသိပ်ချစ်လွန်းလို့ပါ။ လှည့်စားဖို့အတွက်လည်း မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ်သေချာဆုံးဖြတ်ပြီးမှ အသည်းထဲက Bunny ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ သာယာတာမဟုတ်တဲ့ ချစ်ခြင်းအစစ်တွေ...အစစ်တွေပါ Bunny လေးရယ်။
'ချစ်တယ် .... Bunny'
အေးမြတဲ့ လေနုအေးတွေဟာ အင်းယားကန်ဘောင်ကိုဖြတ်ပြီး သူ့ဘေးကနေ အသာလျှောက်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ဆီ ရောက်လာတယ်။ ခပ်ဖြေးဖြေးခြေလှမ်းတွေနဲ့ လျှောက်လှမ်းရင်း အိမ်ကိုပြန်လာဖြစ်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလလေးရဲ့ ညနေခင်း မှာပေါ့။ ကန်ဘောင်ပေါ်မှာတော့ ဒွိယံ ဒွိယံအတွဲလေးတွေက ကြည်နူးသာယာနေလိုက်ကြတာ။ ဟော...ကောင်ကလေး တစ်ယောက်က သူ့ကောင်မလေးကို ပါးပြင်အနမ်းပေးတာ နှင်းဆီခင်းပါးပြင်ဖြစ်ရင်း ကောင်ကလေးကို လက်သီးဆုပ် နဲ့ထုလေတာ။ လွမ်းဆွတ်မှုဆိုတာ ရိုးများရိုးနေပြီထင်ပေမဲ့.....တမ်းတမိသွားပေါ့။
'ဟုတ်တယ် မာမီ သားပြန်ရောက်ပြီ။ အဆင်ပြေတယ်အားလုံး ဒီညနေတောင် မြ၀တီကလွှင့်မယ်'
'သားခဏနေမှ စားမယ်လေ ။ မဆာသေးလို့ပါ မာမီ'
ဖေဖော်ဝါရီ ၂ရက်ကိုရောက်ပြန်ပေါ့ Bunny ။ ဒီနေ့ Bunny မွေးနေ့လေ။
အခန်းထဲ ၀င်လာရင်း အ၀တ်ဘီရိုကြီးကို ဖွင့်လိုက်မိတော့ အလယ်ဆင့်အခန်းငယ်လေးရဲ့နံရံမှာ ကိုယ်တို့နှစ်ဦးရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ၊ Bunny ရဲ့ ဓာတ်ပုံ stand လေးတွေအများကြီး။ ပြီးတော့နှစ်စဉ်မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးတွေ မပျက်တမ်းထည့်ပေးနေဖြစ်တာ ဒီနေ့ မြို့ထဲသွားရင်း Bunny ကြိုက်တဲ့ရေမွှေးတွေ့လို့ ၀ယ်လာဖြစ်တယ် မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေါ့...Bunny ကြိုက်မှာပါ။
မွေးနေ့ရှင်အတွက်...သီချင်းလေးဆိုပြမယ်။ နားထောင်နေမယ်မဟုတ်လား Bunny?
အရာရာမှာ မင်းကတော့ ပေးခဲ့သူ
အကြိမ်ကြိမ်ခါ အမှားများလည်း ပြင်မရတော့ ကိုရူး
ဒီကမ္ဘာမှာ ကို့အတွက် အနှိုင်းမဲ့သူလေး
CHO: မင်းလေး သိနိုင်စေ မင်းလေးကြားပါစေ
ရင်ခုန်သံတွေ မပြောင်းလဲပဲ သိပ်ချစ်တဲ့အကြောင်း
တို့ နှစ်ယောက်ဝေးရလဲ ထားခဲ့သစ္စာနဲ့
ဂစ်တာလေးကို တိုးတိုးငြင်သာတီးရင်း Bunny အတွက်သီးသန့်သီချင်းလေးကို ဆိုပြနေဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ပါ အခု အချိန်မှာ ကိုတစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေပေမဲ့လည်း ကိုကိုကျေနပ်ပါတယ်...။ တကယ်လို့ ကံတရားကပြန်ဆုံဆည်း ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုကို...အပြစ်ကင်းတဲ့....ရင်ထဲက ကိုကိုအဖြစ် မြင်ရပါစေမယ်
Wrote by Alex Aung ( 19/5/2010)
Posted by Alex Aung at 4:15 PM 1 comment:
Bunny's Ko Ko (Part I)
မိုးရယ် ရွာချလိုက်ပါဗျို့လို့ လူတချို့မိုးကိုခေါ်ကြတယ်။ မိုးက တာကျိုးအောင် ကန်သင်းကျိုးအောင်လည်းရွာချလိုက်မိရော။ သူတို့မိုးကို မလိုလားကြတော့ဘူး။
'ကိုကို့ကို တကယ်ချစ်ခဲ့တာပါ။ ဘ၀မှာ အဦးဆုံးနှင့် အသည်းထဲ တဆုံးဓားနှင့်ထိုးသလို စူးစူးနစ်နစ်ပေါ့။'
'ကိုကိုနှင့် လူခြင်းမတွေ့ခင် Online မှာ စကားတွေပြောကြ၊ ကိုယ့်အကြောင်း သူ့အကြောင်း ဝေမျှကြ၊ ပျော်စရာဝမ်းနည်းစရာ တွေပြောနေကြချိန်တုန်းက ရင်ထဲ တဆတ်ဆတ်ခုန်နေတာ ယုံမယ်မထင်ဘူး ဘယ်သူမှ။'
'ကိုကိုက ရွာတာများလွန်းလို့ မိုးကိုငြိုငြင်လာတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဖက်စွတ်မိုးလောက် ဖုံသိပ်ရုံလောက်ပဲ ရည်ရွယ်တာ လားဗျာ။ တမင်တကာများ ရွာသွန်းစေချင်ရော့သလား။'
'အချစ်ဆိုတာ ရင်ခုန်ရုံသက်သက်ဆိုရင် ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ Bunny ကတော့ ပျော်ဝင်သွားခဲ့တာဗျ။'
'တော်လောက်ပြီကိုကို အရမ်းချစ်ရပေမဲ့ လမ်းခွဲကြဖို့ Bunny ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။ လမ်းခွဲသင့်ပြီ။'
မှန်ပေါ်မှာ ပေါ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို အနားသတ်နေတဲ့ ဆံနွယ်မရှည့်တရှည်ကို နည်းနည်းစုစည်းလိုက်ကာ သပ်ရပ် အောင် လုပ်လိုက်ပြီးမှ မျက်ကပ်မှန် မတပ်ရသေးမှန်း သတိရတယ်။ ဒီနေ့စတူဒီယိုသွားမှာဆိုတော့ မျက်မှန်ထူထူတပ် သွားလို့ ဘယ်ဖြစ်မလည်း။
ကိုယ်ဝါသနာပါရာကို လုပ်နေရရင် ပျော်ရွှင်မြူးကြွနေတတ်ကြတာ အမှန်ဗျ။ အခုသီချင်းဆိုတာ ၀ါသနာပါတဲ့ ကျွန်တော် သီချင်းတွေစဆိုနေရပြီ၊ အတွဲခွေတွေမှာ ကျိုကြားပါနေရပြီဆိုတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အိုကေမှ စိုပြေနေပါပြီ။
နားမှာတပ်ထားတဲ့ Head phone ကို အသာဖြုတ် သူ့နေရာသူထားပြီး အသံသွင်းခန်းထဲက ထွက်လာချိန်မှာ ကျောပိုး အိတ်ထဲက ဖုန်းသံက တ၀ုတ်ဝုတ် ထဟောင်သလေ။ ပါပီ့အသံလေးသဘောကျလို့ ringtone လုပ်ထားတာ။
အစ်ကို ဘာလုပ်နေလည်း? ထမင်းစားပြီးပြီလားဗျ?'
'No ပါ၊အခုမှ အသံသွင်းပြီးတာကွ၊ ညီရော?'
'စားတော့မှာဗျ၊ အစ်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ဟင်းတွေအိမ်မှာ ချက်လို့ သတိရပြီး ဖုန်းဆက်တာ'
'Good! ညီ့အမေတို့ ဆိုင်ကိုသွားကုန်လို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖုန်းဆက်နေတယ်ပေါ့ အိမ်ကနေ?'
'မင်းကချစ်ဖို့ကောင်းသား၊ ကိုယ့်မှာ ညီမရှိတော့ ကိုယ့်ညီငယ်လေးတစ်ယောက်လို ချစ်ချင်တယ် ရမလား?'
ချစ်ချင်သလိုချစ်တဲ့ ဘာကိုရည်ရွယ်သလည်း မသိပါဘူး။ ရင်ထဲတော့ တစ်မျိုးတမည်ဖြစ်သွားရပါတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ ကျွန်တော့်မှာ ညီငယ်လေးမရှိတာ၊ ပြီးတော့ ကောင်လေးရဲ့ အစ်ကိုခေါ်သံဟာ ကြည်နူးစရာ အကောင်းသားမဟုတ်လား?
'အစ်ကို အခုမှ ထတာလားဗျ၊ တစ်ခုပြောမလို့...ညီတို့...ဟို ခင်တာလည်းကြာပြီ မုံရွာကိုလာလည်ပါလား'
'Good တာပေါ့ ကိုယ်လည်း ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းအားနေတာ။ မုံရွာလာခဲ့မယ်လေ။ ညီတို့အိမ်မှာတော့ မအိပ်ဖူးနော်.....ဟာ...မတည်းဘူးပြောတာကွ...မင်းကလည်း'
ဒီအတောအတွင်း နယ်ရှိုးတွေမှာ လိုက်ဆိုစရာအစီအစဉ်မရှိတာနဲ့အတော်ပါပဲ။ မာမီတို့လည်း အလုပ်မများတုန်း အလည် သွားဦးမှပါ။ ကောင်လေးက ဖော်ရွေတယ် ခင်ဖို့ကောင်းတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်ထဲမှာ နှစ်လိုဖွယ် ခံစားမှုကိုဖြစ်ထွက်ခံစား ရပါတယ် သူနဲ့ပတ်သက်ရတာ။
အ၀တ်တွေ အစုံအလင်ထည့်၊ ပြီးတော့ ပိုက်ဆံလုံလောက်အောင်ဖြည့်ကာ အိတ်ထဲထည့်ထားတဲ့ ကားလတ်မှတ်ကို စမ်းကြည့်မိတော့ ခုလုခုလုနဲ့။ နှိုက်ကြည့်လိုက်မိမှ ကောင်လေးအတွက်ဝယ်ထားတဲ့ iPod ဖြစ်နေတယ်။ ဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးတွေ သွင်းပေးသွားဦးမှပါပဲ။ ဒါမှ သူလေးနားထောင်ဖြစ်မှာ။
'ဟုတ်ကဲ့မာမီ..သားမဆိုးပါဘူးဗျာ။ မုံရွာက သူငယ်ချင်းဆီ အလည်သွားမှာ။ မသောက်ဖူး စိတ်ချ'
ကားဂိတ်သွားခါနီး မာမီ့ကိုကန်တော့ချိန်မှာ စိတ်မပူဖို့ပြောရပါတယ်။ ကလေးမဟုတ်ပေမဲ့ ကျွန်တော်က တစ်ခါတလေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီး Johnny Walker လေးမော့တတ်တာကြောင့်လေ။
'မင်းတို့မုံရွာကလည်းကွာ လည်စရာသိပ်မရှိဘူးနော်။ တစ်ပတ်တောင်မပြည့်သေးဘူး ကုန်သွားတာပဲ'
'မေမေတို့ကပြောတယ်သိလား အစ်ကိုက ခင်ဖို့ကောင်းတယ် နှစ်သက်ဖို့ကောင်းတယ်တဲ့။ ညီပျော်သွားတာပဲ'
ကောင်လေးတို့အိမ်မှာ မတည်းဖြစ်ပေမဲ့ မုံရွာဟိုတယ်မှာ အခန်းယူပြီး နားဖြစ်ပါတယ်။ ရောက်စရက်တွေမှာတော့ ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုသက်သက်လို့ထင်ပေမယ့် ဒီကောင်လေး တိမ်းညွှတ်ပုံကတော့ တစ်မျိုး။
အခုလည်း တနေကုန်သွားလာထားတာဆိုတော့ ငြောင်းငြာနေတာကြောင့် ရေချိုးခန်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ကောင်လေးကတော့ ပေးထားတဲ့လက်ဆောင်နဲ့အတူ ခုတင်ပေါ်မှာငြိမ့်နေတာပေါ့။
အေးမြနေတဲ့ ရေရဲ့အထိအတွေ့ကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံးလန်းဆန်းသွားသလို၊ ရေချိုးဆပ်ပြာရည်အသစ်ကပေးတဲ့ မွှေးပျံ့မှု ကလည်း စိတ်ကိုနွေးထွေးစေသား။ အတန်ကြာ ရေချိုးပြီးနောက် အခန်းတွင်းပြန်ဝင်ခဲ့တော့ ကောင်လေး ကျွန်တော့် မျက်နှာဆီကို ကြည့်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေက ရီဝေေ၀ပါ။
'ဒီမွှေးညှင်းနုလေးတွေက ဘာကြောင့်ရင်ဘတ်ကနေ အောက်နားအထိဆက်နေရတာလဲဟင်'
တရှိန်ထိုး ဆူတက်လာတဲ့ သွေးတွေ နှုတ်ခမ်းဖျားဆီရောက်ရှိကုန်ပြီထင်ပါရဲ့။ တစ်ကိုယ်လုံးတုန်ခါသွားရသလိုပဲ ကောင်လေး အနမ်းကျွမ်းကျင်ပေစွ။ နောက်ပြီး သူ့ရဲ့နူးညံ့တဲ့ ပခုံးသားကို ကိုင်တွယ်မိချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲ သူတိုးဝင်လာတယ်။
ခါးမှာပတ်ထားတဲ့ တဘက်ဖြူဟာ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ပုံလျက်ကျနေသလို ဂျင်းတွေ တီရှပ်တွေနဲ့အတူ iPod ဟာလည်း အတူလှဲလျောင်းလျက်။
ကိုယ့်ကိုချစ်သည်ဆိုသော ကောင်လေးတစ်ယောက်၊ ကိုယ့်ကို ဂရုစိုက်သောကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိသည်ဆိုတော့ ပျော်မိသလိုပါ။ သူပို့ပေးသော အစားအသောက်များ၊ အညာအထည်များ၊ မနက်ခင်းတိုင်းလာနေကျ ဖုန်းထဲက အသံ တွေကလည်း နားဝင်ချိုမြိန်ပေစွ။
မထူးဆန်းဘူးလား? အစပိုင်းမှာတော့ ထူးဆန်းပါသည်။ သူက မိန်းကလေးတစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့ဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံတွေ ပူနွေးစေတာ၊ မြန်လာစေတာကို ပေးစွမ်းနေတယ်။
ရန်ကုန်ရောက်လာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်၊ ခင်မင်စေတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ညီလေးဆိုပြီး အပေါင်းအသင်းတွေဆီ မိတ်ဆက်ပေးဖြစ်တယ်။
အိမ်က မာမီတို့ကလည်း သူ့ကိုတော်တော်ချစ်ကြတာ။ ဒယ်ဒီကဆို သားငယ်လို့ခေါ်သည်အထိ။ ရန်ကုန်ကို သူလာလည် သည့်အခါ ကျွန်တော့်အခန်းမှာသာ အတူတူ အပ်စက်ဖြစ်ကြလေသတည်းပေါ့။
'အစ်ကို့ကို သ၀န်တိုတယ်သိလား သူတို့တွေက ဘာကြောင့် ဖုန်းအကြာကြီးဆက် ဓာတ်ပုံတွေတောင်းလုပ်ရတာလည်း'
'မိတ်ဆက်ပေးမိတာမှားပါတယ်၊ ညီ့သူငယ်ချင်းဖြစ်ပေမဲ့ မျက်လုံးတွေက အစ်ကို့ဆီက မခွာတော့ဘူး'
ကိုကို လို့ပဲခေါ်မယ်ဗျာ။ တစ်ခါမှ ရင်ထဲမဖြစ်ပေါ်ဘူးတဲ့ ရင်ခုန်မှုတွေ ကိုကိုနဲ့မှဖြစ်ပေါ်တာ။ ကိုကိုက စကားပြော ကောင်းတယ်။ Online မှာဆို အသံချိုချိုနှင့် အမြဲပျော်ရွှင်စေတာ။ အတော်လည်း တတ်နိုင်တယ် ရင်ခုန်သံတွေ ဆူတက်လာအောင် သူအမြဲလုပ်တယ်။
စခင်ကာစကတော့ အခုပုံစံမဟုတ်ပါဘူး။ ခပ်တည်တည်ကြီးနဲ့ စကားပြောတာကလည်း တောင့်တောင့်ကြီး။ သုံးလေး ရက်လောက်ကြာတော့ အဲဒီ့ပုံစံမဟုတ်တော့ဘူး အစအနောက်လေးတွေ ဟာသလေးတွေနှင့်။
ရင်ထဲဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဗျာ။ လူတစ်ယောက်အပေါ် မမြင်ဘူးပဲ ဒီလောက်ပျော်ဝင်သွားမိစေတယ်ဆိုတာ။ စကားလုံး တွေကြောင့် ဟုတ်ဟန်မတူပါဘူး ကိုယ်တိုင်က အစိမ်းသက်သက်ဖြစ်နေလို့လား အချစ်နဲ့လေ။
မနက် မနက် အလုပ်ကိုရောက်တော့လည်း သူပြောတဲ့စကားတွေကိုကြားနေတာ။ အိမ်ရောက်လို့ အ၀တ်တွေလည်း တော့လည်း သူကြိုက်တဲ့ အင်္ကျီအရောင်လေးတွေကို သတိရနေတယ်။ ထမင်းစားတော့ရော သူကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ဟင်းလေးတွေ....ကုန်ကုန်ပြောရရင် အချိုတည်းဖို့ မလိုင်လုံးစားရင်တောင် ရင်ထဲချိုပြီး အေးနှင့်နေပြီ။
ကဗျာဆန်တဲ့ ရင်ခုန်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေရပြီပဲ။
'ကိုယ်တို့ အခုမှတွေ့ဖြစ်ကြတာနော် အပြင်မှာ...မင်းက ကိုယ့်ထက်ငယ်တာပဲ'
ကိုကို မသိပါဘူး ညီံခြေဖျားလက်ဖျားတွေအေးစက်နေတယ်ဆိုတာ။ စကားတွေပြောနေရတာ တိမ်တွေထဲလွင့်နေ သလိုပါပဲ။ အောက်ခြေလွတ်နေတဲ့ ခံစားမှုမျိုးဖြစ်နေတာ။ ကိုကို ဘာတွေပြောနေလည်း.. ညီကတော့ ရင်ခုန်နေတာကိုပဲ သိတယ်ဗျာ..။
'Bunny လို့ခေါ်မယ်ကွာ မင်းလေးက ယုန်လေးနဲ့တူလို့'
'ဒါပေါ့....ကိုသိပ်ပျော်သွားပြီ Bunny မင်းလေးက ချစ်ဖို့တကယ်ကောင်းတာပဲ'
ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တဲ့လားကိုကို။ ကိုကိုခေါ်သလိုဆို Bunny ရင်ထဲမှာလည်း ထို့အတူပါပဲဗျာ။ အတူအပြင်ကိုထွက် မြို့ထဲလျှောက်သွား သီချင်းစီဒီတွေဝင်ကြည့် လမ်း၂၀ နားက ဖက်ထုပ်ဆီချက်တို့ သံဈေးထိပ်နားက ကော်ကြော်တို့ စားရတာ အားလုံးဟာ အရသာကိုရှိလို့ ဒီနေ့ဟာ။
'Don't leave me alone Ko Ko'
ခင်ဗျားလေးကလေ တဲ့တိုးကြီးပဲပြောတယ်။ တဖက်သား ဘယ်လိုခံစားရမယ်ဆိုတာ ထည့်မစဉ်းစားဘူး။
Bunny မှ ငါးပိရည်မကျိုတတ်တာ၊ တခြားဟင်းတွေကတော့ အဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လား?
ကိုကို အ၀တ်လဲပြီးရင် ထမင်းစားပြီး ဆေးသောက်လိုက်နော်။ ကိုယ်ငွေ့နည်းနည်းရှိချင်တယ်။
ကိုကိုရုံးကိုလာကြိုတာ အရမ်းပျော်တာပေါ့ဗျ။ Bunny အခုရုံးခဏပြန်သွားရဦးမယ်။ ကိုကို နေခဲ့ဦးနော် Bunny ပြန်လာမှ အိမ်ကို လိုက်ပို့ပေးမယ်လေ။
'စိတ်မဆိုးပါဘူး ကိုကိုရယ်၊ ပွင့်လင်းတာကြိုက်ပါတယ်။ ကိုကို့မာမီချက်တာလိုတော့ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ။ ကိုယ်ချက်ကျွေးတာကို သဘောမကျဘူးဆိုပြီး နည်းနည်းတော့ အောင့်တာပေါ့ဗျ'
မိုးဖွားလေးတွေကျတဲ့အချိန်မှ ကိုကို့ဆီဖုန်းဆက်ရမှာကို အားတင်းဖြစ်တယ်။ ကိုကိုစိတ်ခုသွားသလားမသိ။ Bunny....Bunny အတွေ့အကြုံမရှိတော့၊ နောက်ပြီး....Bunny ကြောက်လို့ပါကိုကိုရယ်။
Bunny တို့တွေ့ဖြစ်ကြတာ ဒီကိစ္စက အရေးပိုကြီးနေသလား? ကိုကိုခဏ ခဏတောင်းဆိုတာကို မလိုက်လျောနိုင် တာကြောင့် ကိုကိုရှက်ပြီး စိတ်ခုသွားတယ်။
ကိုကိုနဲ့မတွေ့ရတာ Bunny မနေနိုင်ဘူး ကိုကို၊ ကိုကို့ကို Bunny တကယ်ချစ်သွားပြီဗျာ။ ကိုကို့ စိတ်သဘောအတိုင်း လိုက်လျော ပါတော့မယ်။ ကိုကိုသာ Bunny ကို အထင်သေး တန်ဖိုးမထားတာမျိုးတွေ မဖြစ်ပေါ်အောင် ပြုမူပေးပါလို့။
'ကိုကို Bunny တို့ တွေ့နေကြ ဆိုင်လေးကိုလာခဲ့နော်။ ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဗျာ ကိုကိုနဲ့တွေ့ချင်လို့'
ဆိုင်ထဲ ထိုင်စောင့်ဖြစ်တဲ့ခဏ ရင်ထဲမှာ ရင်ခုန်သံအရမ်းပြင်းနေသလို ခံစားရတယ်။ သူ့ကိုချစ်ရင် သူ့ဆန္ဒအားလုံး လိုက်လျောရမှာဆိုတော့ ကိုယ်တကယ်လိုက်လျောနိုင်ပါ့မလား တွေးပြီးတော့....
'Bunny မွေးနေ့သက္ကရာဇ်ကို မှတ်မိလား ကိုကို? Bunny လက်ကိုင်ဖုန်း password ကအဲဒါပဲ။ ဖွင့်ပြပေးပါလား'
'ဟာဗျာ ကိုကိုကလည်း သေချာမကြည့်ဘူး၊ ပွင့်တာတော့ပွင့်တာပေါ့ ပြန်ဖွင့်ပြီး ဖုန်း screen ကို ကြည့်လေဗျာ'
'ဟုတ်တယ် တွေ့ပြီလား Bunny Love Ko Ko ဆိုတဲ့ စာတမ်းလေးကို'
ကိုကို အရမ်းပျော်သွားတာ ကျေနပ်ပါတယ်။ မျက်နှာမှာ အပြုံးကိုဝေလို့။ အမြဲပျော်ရွှင်စေချင်တာ ပြုံးနေစေချင်တာ Bunny ဆန္ဒပါ။
ဒါပေမဲ့ကိုကို.....Bunny ကြောက်နေသလိုပဲ တစ်ခုခုကို...
'ကိုကိုက ဘာကြောင့် လှည့်လှည့်ကြည့်ရတာလည်း ခေါ်သံကြားတာနဲ့။ ကိုကို့နာမည်ကို ခေါ်တာမှမဟုတ်တာပဲ'
'Bunny ကလည်းကွာ ကိုယ်က မျက်မှန်ပါဝါများတော့ တည့်တည့်ကြီးတိုးတာတောင် မမြင်ဘူး။ မျက်စိမှုန်တဲ့အပြင် နားမကြားဘူးလားထင်မှာစိုးလို့ပါကွာ'
'ကိုကို ဒီသီချင်းလေးကို Bunny အတွက် သီချင်းအဖြစ်ရေးပေးပါလားဗျာ'
'Wan Lee Hon ရဲ့ သီချင်းလေးကို Bunny အတွက်လက်ဆောင်အဖြစ်ရေးပေးပါလား? ကိုကိုနားထောင်ပြီးရင် ကြိုက်သွား မှာပါ သူ့ရဲ့သံစဉ်လေးတွေကို။
'ကိုယ် ကော်ပီတော့မဆိုချင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ Bunny အတွက်သီးသန့်အဖြစ်ရေးပေးမှာပေါ့ '
သီချင်းဆိုတာ သံစဉ်လှလှလေးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတတ်ကြတယ်။ သီချင်းများစွာထဲမှာ ကိုယ့်အတွက် အထူးရည်ရွယ် ထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ နားထောင်ရတာ။ အထူးသဖြင့် ကိုကို့နှုတ်ဖျားက ထွက်ကျ လာမယ့် သီချင်းချိုချိုကို နားထောင်ပါရစေ။
ကိုကို ဂစ်တာတီးပြီး သီချင်းဆိုတဲ့အခါ ကိုကို့မျက်နှာလေးကြည့်ပြီး သံစဉ်ကြောမှာ မျောရတာ Bunny တော်တော်ကြိုက် တယ်
'ကိုကို တေးသီငှက်လေးနား အမြဲနေချင်သူ Bunny ရယ်ပါ'
'ကို့ရဲ့အကြင်နာတွေ Bunny နားလည်စေ
အကြိမ်ကြိမ် ခါ အမှားများလည်း ပြင်မရတော့ ကိုရူး
နယ်ရှိုးပွဲလာဆိုရင်း ကိုရေးပေးထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပိုင်းတစ်စကို ဆိုညည်းမိနေခြင်းပါ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ အသည်းထဲမှာ သူပဲရှိပါတော့တယ်။ ဟုတ်တယ် ကိုပဲတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာ ကြာလာလေလေ ရင်ထဲပိုသိလာလေဖြစ်နေပါပြီ။ မနက်ခင်းတိုင်းလာနေကျ ဖုန်းသံလေးကလည်း တိတ်ဆိတ်နေတာကြာပြီ။ အဲဒီ့ဖုန်းသံကို ကျွန်တော် မေ့ချင်နေပြီဖြစ် သလို မမျှော်လင့်ချင်တော့ပါဘူး။
Bunny နှင့် တွေ့ဖြစ်ကြတာ အဦးအစမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော် တကယ်ချစ်မိသွားပြီ။ သူလည်းပဲချစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာများ ကျွန်တော်တို့အတွဲတွေ လက်ထပ်ခွင့်ရကြရင် သူနှင့်သာ လက်ထပ်မှာ။
'အင်း....လားရှိုးမှာဟုတ်လား အော်အမျိုးတွေဆီသွားလည်တာလား ညီ'
'အဆင်ပြေပါတယ်၊ ဘယ်လိုမှ မထင်ပါဘူး၊ ညီအဆင်ပြေရင် ပြီးတာပါပဲ'
See you လို့မပြောဘဲ ဖုန်းပိတ်လိုက်တယ်။ ဖုန်းသံကိုမမျှော်လင့်ပါဘူးဆိုမှ ကြားရပါတဲ့ ဖုန်းသံလေးပါ။ မုံရွာက ကောင်လေးဆက်တာလေ။ လားရှိုးက အမျိုးတွေဆီသွားလည်သတဲ့။သူ့အသံကြားရတာ ရင်ထဲဘယ်လိုမှ မခုန်တော့ပါ။ သူ့အလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ ဖြစ်တည်နေတဲ့ ခံစားချက်ဖြစ်မှန်း ကျွန်တော်သိတယ်။
လောကကြီးထဲ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘဲ ကျွန်တော်နဲ့ Bunny လက်ခြင်းချိတ်ကာ လျှောက်သွားနေကြတယ်။
မြို့ထဲအနှံ့၊ ဘုရားတွေ၊ ဥယျာဉ်တွေ နေရာများစွာကိုလည်းရောက်ပါတယ်။ ခိုကလေးတွေ အစာကျွေးရင်း နှစ်ဦးသား ကြည်နူးကြတာလည်းအခါခါ။
မင်းလေးရယ်လိုက်ရင် အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ Bunny ။ မင်းအပြုံးတွေကို တစ်သက်လုံးပိုင်ဆိုင်ချင်လိုက် တာ။ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရအောင်ကိုယ်ကြိုးစားမယ်။
Bus ပေါ်မှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချိုချဉ်ခွင့်ကျွေးဖြစ်တော့ စပယ်ယာက မျက်လုံးကြီးပြူးလို့။ ယောက်ျားလေး နှစ်ယောက်က ဒီလိုကြင်နာပြကြဖို့လိုသလားပေါ့လေ။
'ကိုလေး...ကိုလေး....ထတော့လေဗျာ ခဏနေရန်ကုန်ပြန်ဖို့ ကားရောက်လာတော့မှာ'
'အင်း...ကျေးဇူး...ရည်းစားကိုလွမ်းပြီး ငိုက်သွားမိတာဗျ...ဟဲ ဟဲ'
'ဖြစ်ရမယ်....ဒီမှာ ကိုလေးအကြိုက် လိမ္မော်ရည်သောက်လိုက်ဦး ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်က လက်ဆောင်တဲ့ လာပေးသွားတာ'
'ဟုတ်တယ် Bunny ကိုယ်အခုပဲပြန်ရောက်တာ'
'မတွေ့ချင်သေးဘူး ဟုတ်လား? ကိုယ်အရမ်းလွမ်းနေတာကွာ Bunny ကလည်း'
'မင်းကွာ.....စိတ်တိုတယ်၊ မောမောပန်းပန်းပြန်လာသူကို ရင်ဝဆောင့်ကန်တယ်'
ရင်ထဲထိတ်ကနဲဖြစ်သွားမိတယ်။ စိုးရိမ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်တာ။ သူ့အရင်တစ်ယောက်ကို ငြိခဲ့တာ တွေကိုလေ။ အခုအလုပ်မအားလို့ပဲဖြစ်မှာပါ။
အရင်အခေါက်တွေပြန်လာတုန်းကတော့ အပြေးလေးရောက်လာပြီး ရင်ထဲခိုဝင်ကြည်နူးရတာအမော။ ညစ်ပေနေတဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို သူကိုယ်တိုင်လျှော်ဖို့ စီစဉ်ရတာလည်းပါရဲ့။ ၀ယ်လာတတ်တဲ့ နယ်ကမုန့်ကလေးတွေကိုလည်း နှစ်သက်စွာ စားသေး။
'ဟူး.....Bunny ရယ် မခွဲနိုင်တော့ဘူးကွာ'
Posted by Alex Aung at 1:01 PM No comments:
Interview with Sanda Zan Oo
သာမန်ယောက်ျားတွေ အများကြီးထဲက သာမန်ယောက်ျားတယောက်ပါ၊ ဒါပေမယ့် ယောက်ျားလေးချင်းချင်းသာ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့ ဆန္ဒဇန်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ဒီအပတ် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်လေးကို မြန်မာပြည်မှာကြီးပြင်းခဲ့ပြီး ခုခါမှာတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယော့မြို့မှာအခြေကျနေထိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့ ပန်းချီ အနုပညာရှင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လိင်တူချစ်သူ ဆန္ဒဇန်ဦးနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ခံယူချက်လေးတွေနဲ့ လိင်တူချစ်သူတယောက်ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုလေးတွေက စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသလို သက်တန့်ရောင်စာဖတ်ပရိသတ်တွေလည်း စိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့မျော်လင့်ပါတယ်။
အမေး။ ။ အကို့နာမည်နဲ့ အကို့အကြောင်းလေးကို နည်းနည်းပြောပြပေးပါလား။
အဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ နာမည်ကတော့ ဆန္ဒာ့ဇန်ဦးလို့ ခေါ်ပါတယ်။ နေတာကတော့ လောလောဆယ် အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့မှာ နေပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ပန်းချီအနုပညာသည်တဦးပါ။ ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတိုလေးတွေနဲ့ ပြဇာတ်လေးတွေကိုလည်း ဖန်တီး ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ဒီအနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်တာကလည်း အမြတ်အစွန်းရဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အချိန်တော့အများကြီးပေးရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ ကိုယ့်ရဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် အကျိုးပြုတဲ့ လုပ်ငန်းလေးတွေကို လုပ်ပေးရတာဆိုတော့ အားရကျေနပ်တဲ့ ပီတိလေးတွေတော့ဖြစ်မိတယ်။
အမေး။ ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိင်တူစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတာကို ဘယ်အချိန်လောက်ကစပြီး သတိထားမိတာလဲ။ အဲဒီလို သတိပြုမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားခဲ့ရလဲ။
အဖြေ။ ။ ကိုယ်ကတော့ လိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူ၊ အမျိုးသားအချင်းချင်းမှ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတယောက်ပါ။ လူပျိုဖော်မဝင်ခင် ကလေးဘဝတုန်းကဆို ကိုယ်က ယောက်ျားလေးတွေအနားမှာနေရတာ၊ သူတို့နဲ့ကစားရတာကိုပဲ စိတ်ထဲကအားရကျေနပ်တယ်။ တခြားသာမန်ယောက်ျားလေးတွေလိုပါပဲ။ ဘယ်တော့မှ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပေါင်းပြီးကစားချင်တဲ့ စိတ်မျိုးတွေတော့မရှိခဲ့ဘူး။ နောက် လူပျိုဖော်ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ လိင်စိတ်က စပြီး ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အခါမျိုးမှာ စိတ်လာရင်လာသလို ရွှေပန်းကတင်းလာတတ်တယ်။ အဲဒီအရွယ် ဟိုမုန်းစပြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမျိုးလေ။ ဆိုတော့ မိန်းကလေးကို ကြည့်လိုက်လို့ ရွေပန်းကတင်းလာလို့ မိန်းမကိုကြိုက်ရတယ်၊ ယောက်ျားလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းလို့ ရွေပန်းကတင်းလာလို့ ယောက်ျားကြိုက်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းအရင်းက အဓိကမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်အဓိက သတိပြုမိလိုက်တာက မိန်းကလေးနဲ့ အတူတူဆက်ဆံတာထက် ယောက်ျားလေးနဲ့ ဆက်ဆံတာက ကိုယ့်အတွက် ပိုအဆင်ပြေနေတယ်။ ပိုပြီးနှစ်ခြိုက်မိတာ၊ သာယာတာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ အဲဒါလေးလည်း သတိပြုမိလိုက်တဲ့အချက်တချက်ပေါ့။ နောက် ကိုယ်က ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စဆို မိဘဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းတွေက စီစဉ်ပေးတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ကြီးပြင်းလာရတော့ တနေ့ကျရင် ကိုယ့်အတွက် စီစဉ်လက်ထပ်ပေးမယ့် မိန်းမက ဘယ်လိုမိန်းကလေးဖြစ်နေမလဲ၊ ခုချိန်မှာရောသူဘာတွေလုပ်နေလဲ စသဖြင့်ပေါ့ တောင်စဉ်ရေမရ လျှောက်တွေးမိတာတွေလဲ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အတွေးတွေထဲမှာ၊ စိတ်ကူးတွေထဲမှာ သမီးရည်းစားဖြစ်ခဲ့လို့ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ စွန့်စွန့်စားစား ခရီးသွားရတာတို့၊ အပူပိုင်းဒေသက ကျွန်းတွေဆီကို အလည်အပတ်ခရီးထွက်တာတို့ကို စဉ်းစားစိတ်ကူးယဉ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပဲ ကိုယ့်ဘဝလက်တွဲဖော်အဖြစ်နဲ့ အမြဲလိုလို ကိုယ်စိတ်ကူးတွေထဲမှာ ရှိနေတတ်တဲ့သူက ကိုယ့်လိုရွယ်တူ ယောက်ျားလေးတယောက်ပဲ ဖြစ်နေတယ်။ ဆိုတော့ စိတ်ကူးယဉ် အိမ်မက်တွေထဲမှာဆိုရင် သစ်ပင်တက်ရင်လည်း တကိုင်းကနေတကိုင်းကို အတူတူခုန်ကူးကြ၊ ငါးဖမ်းလည်းအတူတူ၊ ရေကူးလည်းအတူတူ၊ အမဲလိုက်တော့လည်း အတူတူ အဲဒီလိုပဲ စိတ်ကူးယဉ်တယ်။ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်လာတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ သေသေချာချာစဉ်းစားကြည့်တော့ ကိုယ့်ဘဝအတွက် ထာဝရလက်တွဲဖော်ဟာ ကိုယ့်လို အမျိုးသားတယောက်ပဲဆိုတာ ပိုပြီးသေချာလာတယ်လေ။
အမေး။ ။ ဘယ်အချိန်လောက်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လိင်တူချစ်သူတယောက်အနေနဲ့ ဖွင့်ထုတ်ပြောဆိုလိုက်တာလဲ။ အဲဒီတုန်းက စိတ်ခံစားမှု၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုလေးတွေကိုလည်း နည်းနည်းပြောပြပေးပါလား။
အဖြေ။ ။ ကိုယ့်ရဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုကို ဖွင့်ထုတ်လိုက်တယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြေညာလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအတွေးအခေါ်က အနောက်နိုင်ငံကလာတယ်လို့ ကိုယ်ထင်တယ်။ ကိုယ်က လောလောဆယ်မှာ အနောက်နိုင်ငံမှာသာ နေတယ်ဆိုပေမယ့် အခုချိန်ထိ ကိုယ်တို့ အာရှသားတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကို ကျင့်သုံးတန်ဖိုးထားနေတုန်းပါ။ ဆိုတော့ ဂေးဖြစ်တာကနောက်မှဖြစ်တာ အာရှယဉ်ကျေးမှုက ကိုယ့်ဘဝထဲကိုရောက်လာတာ ပထမလေ။ ဖွင့်ထုတ်ပြောဆိုလိုက်တယ်ဆိုတာက အခက်အခဲကို မျက်နှာချင်းဆိုင် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်တာမျိုးလေ။ ဒါက ကိုယ်ကြီးပြင်းလာတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်း အာရှသားတွေရဲ့ အလေ့အထတခုမဟုတ်သလိုမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် မိဘတွေကတော့ သိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမေဖြစ်တဲ့သူတွေဆို ပိုသိတယ်။ ကိုယ်ကတော့ အရမ်းကံကောင်းတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ မိသားစုက အရမ်းကိုကြင်နာငဲ့ညှာတတ်တဲ့ မိသားစုလေ။ ကိုယ်ကနည်းနည်း ဂျီးများတတ်တဲ့သူဆိုတော့လည်း ထုံးစံအတိုင်း အိမ်ကမိန်းမပေးစားဖို့ စီစဉ်ပြီဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ် ဇနီးလောင်းအတွက် မဖြစ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ဇွတ်မြှင့်တင်ပြီး ပေးထားလိုက်တယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီအရည်အချင်းကိုပြည့်မှီတဲ့ မိန်းကလေးတယောက်ရဖို့ဆိုရင် တော်တော့်ကိုမလွယ်ဘူး။ မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာဆို ရှားတယ်ပေါ့။ တချို့အမျိုးသမီးတွေကြတော့လည်း ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ အရည်းအချင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့သူတွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ်ဘာလဲဆိုတာ သဘောပေါက်သွားကြပုံရပါတယ်။
မိသားစုက ကိုယ့်လိင်စိတ်ခံယူမှုကို သဘောပေါက်နားလည်လိုက်တယ်လို့ သေသေချာချာသိလိုက်ရတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အဖြစ်အပျက်နှစ်ခုတော့ရှိတယ်။ တခါ ကိုယ်အိမ်ကနေခွဲပြီးတော့ အပြင်မှာ အခန်းပြောင်းနေဖို့ဆိုတော့ သူငယ်ချင်းကောင်လေး တယောက်နဲ့ အပြင်မှာအတူနေဖို့ပြင်တယ်။ အတူပေါင်းနေမယ့်သူငယ်ချင်းကလည်း ကိုယ်နဲ့တွေ့တာသိပ်မကြာသေးတဲ့တယောက် ဆိုတော့ သူက သူ့ပုံတွေကို အခန်းနံရံတွေမှာ အများကြီးပဲချိတ်ဆွဲထားတာ၊ သူငယ်ချင်းက နည်းနည်းနွဲ့တယ် ဓါတ်ပုံထဲမှာဆိုသိသာတယ်။ အဲဒီပုံတွေကို အမေကပြုံးပြုံးလေးကြည့်ပြီး မှတ်ချက်ချဖူးတယ်။ ဓါတ်ပုံထဲကကောင်လေးက အမေသိတဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသားတယောက်နဲ့ အရမ်းတူတယ်ပေါ့။ နောက် နှစ်အတော်လေးကြာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်အခုလက်ရှိအချိန်ထိ ပေါင်းနေတဲ့ ကိုယ့်ရည်းစားကောင်လေးနဲ့အတူ အခန်းတခန်းထဲမှာပဲ အတူပေါင်းနေကြတယ်။ အဲဒီမှာ မိသားစုက အခန်းသစ်ကို လာလည်မယ်လည်း လုပ်ရော ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်မှာ နေတာကလည်းတခန်းထဲ၊ ကုတင်ကလည်းတခုတည်း ပြီးတော့ကိုယ်ကလည်း အနောက်နိုင်ငံမှာ နေလာတာကလည်းကြာပြီဆိုတော့ တမျိုးထင်မှာကိုတော့ နည်းနည်းစိုးရိမ်ပူပန်မိတယ်။ ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သား ဂေး ဆိုတဲ့စကားလုံးပါတဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယမှန်သမျှ အကုန်အကုန်ဖွက်ထားရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သူတို့တွေ ရောက်ချလာပါရော။ အခန်းထဲကို ပထမဦးဆုံးစဝင်တာက အမေပဲ၊ ဝင်လာတာနဲ့ ကုတင်ကိုကြည့်တယ်။ ဒီကုတင်တခုတည်းမှာ အိပ်ကြတာလားဆိုပြီးမေးတယ်။ ကိုယ်ကပထမတော့ ဆင်ခြေဆင်လက်တွေ တပုံကြီးစဉ်းစားထားပြီးသား။ ဒါပေမယ့် ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်။ အမေပဲဒီလောက်တော့မညံ့ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ဝမ်းနဲ့လွယ်မွေးထားတာ ဆိုတော့ သိမှာပေါ့။ ဒါနဲ့ကိုယ်မညာဖြစ်ဘူး၊ ဟုတ်တယ်လို့ပဲ ဝန်ခံလိုက်တယ်။ ဆိုတော့ အမေက အပြုံးလေးနဲ့ပဲ နေရာအနှံ့လိုက်ကြည့်တယ်။ နောက်တော့လည်း ကိုယ့်ညီတွေ ညီမလေးတွေကလည်း ကိုယ့်ချစ်သူကို သူတို့ရဲ့ အကိုရင်းလိုပဲဆက်ဆံကြတယ်။ အမေဆိုရင်လည်း သူ့သားအရင်းလိုပဲ ဆက်ဆံတယ်။ တခါ အမေကင်ဆာဖြစ်လို့ ဆေးရုံတင်ထားတုန်း ကိုယ်ကအမေ့ကို လနဲ့ချီပြီးသွားပြုစုရတယ်။ ဆိုတော့ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့မတွေ့ရတာလည်း ကြာလာတော့ သူ့ကိုသတိရပြီးလွမ်းလာတယ်။ ဒါကိုအမေက သတိပြုမိတယ်ထင်တယ်။ ကိုယ့်ကိုပြောတယ် ချစ်သူကိုသွားတွေ့လိုက်ပေါ့ ပြီးမှပြန်လာခဲ့လို့ရတာပဲဆိုပြီးပြောတာ။ အဲဒီစကားက အမေနောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့စကားပဲ။ အမေကသူ့သားကို သူ့ချစ်သူနဲ့ အတူပေါင်းဖက်သွားစေချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိခဲ့သူပါ။
အမေး။ ။ ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကို လိင်တူချစ်သူဘဝကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နေထိုင်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းမှာရော၊ မိသားစုထဲမှာရော ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲ။
အဖြေ။ ။ မိမိကိုယ်ကိုသာ မိမိယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ စိန်ခေါ်မှုဆိုတာတွေက ဘာမှမှုစရာမလိုပါဘူး။ သေချာတာကတော့ ကိုယ်ကဘာပဲလုပ်လုပ် မလုပ်လုပ် လူတွေကတော့ ပြောကြမှာပဲ ပြောရမှာက သူတို့အလုပ်လိုကိုဖြစ်နေတာ။ သူတို့ရဲ့အပြောထဲမှာ ကိုယ့်ဘဝတခုလုံး နှစ်မျောပါမသွားဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ အဓိကကိုယ့်ကိုယ်ကို အမှန်အတိုင်း လက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်လေ။ တကယ်လို့ လူတွေကကိုယ်နဲ့ ပေါင်းသင်းရတာပြဿနာလို့ထင်ရင် သူတို့ဟာသူတို့ ရှောင်ထွက်သွားကြလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ကလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဦးရေ ၆ ဒသမ ၇၆ ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့ထဲမှ ရာဂဏန်းလောက်သာသာရှိတဲ့ လူတွေက ကိုယ့်ကိုမုန်းတာ ဘာမှဂရုစိုက်စရာမရှိပါဘူး။
အမေး။ ။ ဒီလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရော ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာဓူဝ လူမှုဘဝပုံစံကို ဘယ်လိုမျိုး ရွေးချယ်ခဲ့လဲ။ ဥပမာ - မိန်းမလို ဝတ်စားဆင်ယင်ပြီးတော့နေထိုင်သွားမလား။ ဒါမှမဟုတ် ယောက်ျားလေးတယောက်လို နေထိုင်သွားလား။ ဘာကြောင့်အဲဒီလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ။
အဖြေ။ ။ ကိုယ့်ရဲ့ လိင်စိတ်စပြီး ဖွံ့ဖြိုးနိုးကြားလာကတည်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂေး ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနေတယ်။ ဘယ်သူမဆို ယောက်ျားမိန်းမကြိုက်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်၊ လိင်တူကြိုက်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ် လူပျို အပျိုဖော်ဝင်စမှာ လိင်မှုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ အသစ်အဆန်းလေးတွေကို စူးစမ်းချင်လို့ လုပ်မိတာလေးတွေတော့ ရှိတာပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကတော့ အမြဲတန်း ယောက်ျားလေးကိုပဲကြိုက်တယ်ဆိုတာ ပိုသေချာသွားတယ်။ ကိုယ်ဟာ ယောက်ျားတွေအများကြီးထဲက ယောက်ျားတယောက်ပါ။ ယောက်ျားကိုပဲ ကြိုက်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ပါ၊ ယောက်ျားတွေအနားမှာနေရတာ စိတ်ကျေနပ်တယ်။ ချွေးသံတရွှဲရွှဲနဲ့ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တွေ အားကစားမျိုးတွေ လုပ်ရတာကြိုက်တယ်။ ယောက်ျားတွေရဲ့ ကိုယ်သင်းရနံ့ကို စွဲလန်းနှစ်ခြိုက်တဲ့ ယောက်ျားတယောက်ပါလို့ ဆိုပါရစေ။
အမေး။ ။ ဘဝမှာ အခက်အခဲတွေကို ဘယ်လိုအောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့လဲ။ ဘယ်လိုမျိုးခံစားချက်အတွေ့အကြုံတွေရခဲ့လဲ။
အဖြေ။ ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ဖို့ ဗုဒ္ဓဘာသာက ဆုံးမသင်ကြားထားတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ သူတယောက်အနေနဲ့လည်း အမြဲလို အခြေအနေကိုကောင်းကောင်း နားလည်သဘောပေါက်အောင် အကျိုးအကြောင်း၊ အဖြစ်အပျက်မှန်သမျှရဲ့ အကျိုးအဆက်တွေကို သုံးသပ်တယ်။ ပြီးတော့မှ ဘယ်နည်းလမ်းကိုရွေးမလဲဆိုပြီး ပြန်စဉ်းစားတယ်။ အမေဆိုရင်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို အလွန်ပဲကိုးကွယ်ယုံကြည်သူပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ မိဘတွေက တွေ့သမျှဘုန်းကြီးတိုင်းကို ထိုင်ရှစ်ခိုးမယ့်လူမျိုးတွေတော့ မဟုတ်ဘူး။ ငယ်ငယ်ကတည်းကကို မေးခွန်းပြန်ထုတ်တတ်ဖို့၊ ပြန်မေးတတ်ဖို့ဆို အမြဲသွန်သင်ခံရတယ်။ ပြီးတော့ အရာရာတိုင်းကို မျက်စိစုံမှိတ်မယုံကြည်ဖို့လည်း ဆုံးမတာ အမြဲခံခဲ့ရတယ်လေ။ ငယ်ငယ်ကဆို ကျောင်းမသွားခင် မိဘတွေက အမြဲ မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာဖို့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်အာရုံစုစည်းဖို့ အမြဲမှာတယ်။ တကယ်လို့ ပြဿနာ အခြေအနေ တရပ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်လည်း ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ် အရင်အာရုံစုစည်းလိုက်တယ်။ ပြီးရင် အခြေအနေကိုလေ့လာ အကဲခတ်လိုက်တယ်။ စိတ်ခံစားမှုကို လျှော့နိုင်သလောက် အရင်လျှော့ချတယ်။ ပြီးတော့မှ ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ၊ ဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့နည်းလမ်းကို စဉ်းစားတယ်။
အမေး။ ။ မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ အထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုက လိင်တူချစ်သူတွေကို အထင်အမြင်သေးရှုပ်ချတာတွေ လုပ်ကြတာရှိတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာရော ဘယ်လိုမြင်လဲ၊ ဘယ်လိုပြောချင်ပါသလဲ။
အဖြေ။ ။ ကိုယ်ကမြန်မာပြည်မှာမွေးတာဆိုတော့ ငယ်ငယ်ကအဖြစ်အပျက်တွေကို သတိရနေသေးတယ်။ ကိုယ်တို့ခေတ်မှာ မြန်မာပြည်က ရှောက်သီးဆေးပြားသည် ဂျီမတွေလည်း ဖျော်ဖြေရေးအခန်းကဏ္ဍမှာ တထောင့်တနေရာကနေပြီးတော့ ပါဝင်နေခဲ့ကြတယ်လို့မြင်တယ်။ ရှောက်သီးဆေးပြားသည် အိမ်ရှေ့ကဖြတ်လာပြီဆိုရင် ညီတဝမ်းကွဲတွေက ပြေးခေါ်ပြီးတော့ ကခိုင်းတော့တာပဲ။ ပြီးရင် တိုက်တန်တဲ့ အခကြေးငွေကိုလည်းပြန်ပေးကြတယ်။ ဘယ်သူမှ ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေ၊ နှိမ့်ချပြောဆိုတာတွေ တော့မလုပ်ကြဘူး။ ကိုယ့်ဆွေမျိုးတွေထဲမှာလဲ အဲလိုလိင်တူစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ လူပျိုစစ်စစ်တွေအများကြီးပဲ။ အားလုံးပဲ တလေးတစား ဆက်ဆံခံရတာပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေအားလုံးကတော့ ယောက်ျားလေးလိုပဲ ဝတ်စားဆင်ယင်ကြတယ်။ ဘယ်သူမှတော့ မိန်းမအဝတ်အစားတွေ ဝတ်ဆင်တာမျိုးမရှိဘူး။ ဆိုတော့ အဲဒီဝတ်စားဆင်ယင်မှုကြောင့်ပဲ လေးလေးစားစားဆက်ဆံ ခံရတာလားဆိုတာတော့ ကိုယ်လဲ မစဉ်းစားတတ်ဘူးနော်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေထဲမှာလည်း ဒီလိင်တူချင်းချစ်တဲ့ ကိစ္စကိုပြဿနာတခုလို့ကိုယ်ကတော့မမြင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့ မြန်မာပြည်မှာက ဗုဒ္ဓဘာသာတင်မကဘူး အရာရာတိုင်းက ပျက်စီးယိုယွင်းလာနေတော့ အခုအခြေအနေကိုတော့ မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်။ တကယ်လို့ တယောက်ယောက်ကသာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အကြောင်းကို နက်နက်နဲနဲ လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ လိင်တူချစ်သူတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ လိင်တူချင်းဆိုတဲ့စကာလုံးကို တလုံးတပါဒမှ မဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Homosexualလို့ခေါ်တဲ့ လိင်တူချင်းဆက်ဆံသူများဆိုတဲ့ စကားလုံးက ဘယ်ဘာသာတရားမှာမှ ဖော်ပြမထားခဲ့ကြပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီ Homosexualလို့ခေါ်တဲ့ စကားလုံးကိုယ်၌က ပေါ်လာတာ အနှစ် ၇ဝ လောက်ပဲရှိသေးလို့ပါပဲ။ ကိုယ်နားလည်သလောက်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ လိင် (သို့) ကာမနဲ့ပတ်သက်လို့ မကောင်းတာ၊ မလုပ်သင့်တာဆိုလို့ရှိရင် လွဲမှားပြီး အလွဲသုံးစား မပြုမိဖို့ပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အဓိကအနှစ်သာရက သူတပါးကို ညှာတာချစ်ခင်ဖို့ပါပဲ။ တပါးသူကို ခွဲခြားဆက်ဆံတာ၊ နှိမ်ချတာ၊ ဖိနှိပ်တယ်ဆိုတာတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေရဲ့ ကျင့်စဉ်နဲ့ လုံးလုံးကိုဆန့်ကျင်နေပါတယ်။
အမေး။ ။ လိင်တူချစ်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာ ယေဘူယျအားဖြင့် အထင်အမြင်လွဲမှားလေ့ရှိတဲ့ အချက်တွေကဘာတွေများလဲ။ ပြီးတော့ အဲဒီအပေါ်မှာရော ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မှုမျိုး ပေးချင်ပါလဲ။
အဖြေ။ ။ အဓိက နားလည်မှုလွဲနေတဲ့အချက်က ကိုယ့်ရဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုအပေါ် လုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိတာပါ။ လိင်တူချစ်တဲ့သူတွေကို မုန်းတဲ့သူအတော်များများက များသောအားဖြင့် မိမိရဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုကို စိတ်မချတဲ့သူတွေ၊ သေသေချာချာဝေခွဲမရတဲ့သူတွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ့်ရဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုကို မေးခွန်းထုတ်နေရတဲ့သူတွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သံသယဖြစ်နေတဲ့သူတွေသာ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ စဉ်စားကြည့်ပါ ယောက်ျားချင်းကြိုက်တဲ့ ဂေး တွေကို မိန်းမတွေက ကြောက်စရာမလိုသလို၊ မိန်းမသားကိုသာ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ယောက်ျားမှန်ရင်လည်း ဂေး ယောက်ျားတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းရမှာ စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ (ဆိုလိုတာက မိန်းမကြိုက်တဲ့သူမှန်ရင် ဘယ်တော့မှ ယောက်ျားချင်းကြိုက်တဲ့ လူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး)။
အမေး။ ။ လူမှုအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အသီးသီးမှာ လိင်တူချင်းချစ်သူတွေကိုရော၊ အခြားသူတွေလိုပဲ တန်းတူဆက်ဆံဖို့သင့်တယ်လို့ ထင်ပါသလား။
အဖြေ။ ။ သိပ်သေချာတာပေါ့။ အခြားသူတဖက်သားကို နာကျင်စေတဲ့ လုပ်ငန်းမျိုးမဟုတ်သရွေ့တော့ ဘယ်အလုပ်မဆို ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါ။ အလုပ်တိုင်းကိုလေးစားဖို့လိုပါတယ်။
အမေး။ ။ မြန်မာပြည်က လိင်တူချစ်သူတွေကို ပါးချင်တဲ့သတင်းစကားလေးက။
အဖြေ။ ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပါ။ လိင်မှုကိစ္စနဲ့ လိင်စိတ်ခံစားမှုဆိုတာတွေက လူ့ဘဝတခုလုံးနဲ့နှိုင်းယှဉ် လိုက်မယ်ဆိုရင် အစိတ်အပိုင်း အသေးအမွှားကလေးပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာကို ပထမဆုံး နားလည်အောင်အရင်လုပ်ပါ။ အဖြစ်မှန်ကိုလက်ခံလိုက်ပါ။ ပြီးမှ ရှေ့ဆက်လျှောက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုလူတွေ ဆက်ဆံခိုင်းစေချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်း သူတပါးကိုလည်း အဲဒီအတိုင်းပဲဆက်ဆံပါ။ လူ့ဘဝဆိုတာ ဘဝပေါင်းများစွာနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး ဖြန်သန်းလာရတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။ ငယ်ငယ်ကဆိုရင်ကလေးဘဝ၊ တချိန်ထဲမှာပဲ မိသားစုညီအစ်ကိုမောင်နှမဘဝ၊ ပြီးရင်ကျောင်းသားဘဝ၊ သူငယ်ချင်းဘဝ၊ လုပ်ငန်းဘဝ အဲဒီလိုဘဝပေါင်းများစွာနဲ့ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတယ်။ အဲဒီဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ ဘဝပေါင်းများထဲကနေရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေပေါ် အခြေခံပြီးမှ ကိုယ်တို့က သင်ခန်းစာယူ အနာဂတ်အတွက် ပြင်ဆင်ပြီး ရှေ့ဆက်အသက်ရှင်သွားကြရမှာပါ။
Posted by Alex Aung at 7:23 PM No comments: